XEERKA GOBOLLADA IYO DEGMOOYINKA: XEER LR. 23/2002 (& 2007 )
REGIONS & DISTRICTS LAW: LAW NO: 23/2002 AS AMENDED IN 2007
Markuu Arkay: - Qodobada 109, 111 iyo 112 Ee Dastuurka.
Markuu Garowsaday:- Gol dalooloyinkii xeerkii hore ee ismaamulka Gobolada iyo Degmooyinka iyo sida loogu baahan
yahay in lagu sameeyo dib u habayn iyo sixid.
Markuu Arkay: - Muhimada Balaadhan Ee ay leeyihiin dhismaha Golayaal Deegaan oo Dadweynuhu doortay, oo
Nasteex u ah horumarinta iyo Daryeelka Danaha Umadda.
Markuu Tixgaliyey:- Duruufaha Dhaqan dhaqaale iyo heerka koboca garaadka siyaasiga ee bulshada somaliland
Markuu Qaderiyey:- Ahmiyada weyn ee uu leeyahay ismaamulka gobolada iyo degmooyinka iyo baahida loo qabo hoos u daadejinta xukunka.
Marku Aqoonsaday:- Siday lama huraan u tahay iswaafajinta nadaamka siyaasadeed ee habka xisbiyada badan iyo habka
ismaamulka gobolada iyo degmooyinka.
Markay u Cadaatay:- In ay waajib tahay dejinta iyo soo saarida xeerkan, maadaama ay u cadilan yihiin hawlo muhiim u ah
habsami u socodsiinta ismaamulka gobolada iyo degmooyinka.
Marku ku Qancay:- in nuxurka xeerkani xambaarsan yahay uu sixid iyo toosinba u noqon karo qaladaadkii iyo murankii hore u jiray.
Markuu u Codeeyay : Dib-u-eegistii iyo Soo jeedintii Golaha Guurtida
Wuxuu Ansixiyey Xeerkan 23/2002
BEDELAAD IYO WAX KU KORDHIN LAGU SAMEEYAY
MACNAHA EREY BIXINTA
Gobol : waxa loola jeedaa Gobolada uu u qaybsan yahay Dalka Jamhuuriyadda Somaliland Ee Xeerkani tilmaamayo.
Gole Hor. ee Gobol: Waxaa loola jeeda Gole ka kooban Gudida Fulinta ee Gobolka, Maayarada Degmoyinka ee Gobolka iyo Madaxda laamaha Dawlada ee Heer Gobol
Gole Hor. Ee Deg.: Waxaa loola jeeda gole ka kooban Gudida Fulinta ee Degmada, Madaxda laamaa dawlada iyo Taliyeyaasha Ciidama ee Heer Degmo.
Degmo: Waxa loola jeedaa Degmooyinka ay u qaybsamaan Goboladda Dalka JSL Ee xeerkani tilmaamayo.
Xuduud/aha: Waxa loola jeedaa xariiqyada Khariidada Dalka Ee xadeeya Gobolada Dalka JSL wadaagaan ama Gobol la wadaago Dalalka aynu Jaarka nahay Ee Xeerkani tilmaamay.
Soohdimaha: waxa loola jeedaa soohdimaha u dhaxeeya Degmooyinka Dalka Ee xadeeya jiidaha Maamulka Degmada hoos yimaada.
Gole Deegaan: Waxa loola jeedaa (Gole Degmo) Xubnaha Dadweynuhu si sharci ah ugu doorteen hogaaminta Maamulka iyo sharci Dejinta Degmada.
Duqa/Mayor: Waxa loola jeedaa Xubinta Golaha Deegaanka Ee Degmo iska dhex doorteen inuu noqdo Guddoomiyaha Degmada iyo kan Golaha Deegaanka.
Ee Gobol Waxaa loola jeeda sarkaalka ugu sareeya shaqaalaha Xarunta Gobolka ee uu soomagacaabo Wasiirka Arrimaha Guduhu
Degmo Waxa loola jeedaa hawlwadeenka ugu sareeya shaqaalaha Dawladda Hoose Ee Degmada ee uu soo magacaabo Golaha Degaanka Degmadu
Degmada: Waxa loola jeedaa musuulka guud ee Dawladda ee heer Degmo (District Commissioneer) ahna Gudoomiyaha Golaha Deegaanka Degmadda (Mayor)
Taliyaha Saldhiga: Waxa loola jeedaa Taliyaha ciidanka Booliska ee heer Degmo(District Police Commissioner)
Wasiir: waxa loola jeedaa Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha JSL.
Wasaaradda: Waxa loola jeedaa Wasaaradda Arrimaha Gudaha.
Darajooyinka: Waxa loola jeedaa maqaamka degmo loo qoondeeyay markii la qiimeeyay, waxsoo saarka, dhaqaalaha, tirada Dadweynaha, baaxada Dhulka IWM. Sida xeerkani tilmaamayo.
1. Qaab dhismeedka Dalka JSL wuxuu ka kooban yahay una qaybsamaa Gobolo iyo Degmooyin
2. Caasimada Dalka Jsl waa Hargeysa waxayna yeelan doontaa Xeer u gaar ah
3. Gobolkii hore ee waqooyi Galbeed wuxu isu-beddelay Gobolka Maroodi-jeex, laga bilaabo Ansixinta Xeerka Caasimadda.
SHURUUDAHA LAGU MAGACAABI KARO GOBOL AMA DEGMO
Shuruudaha (Criteria) lagu magacaabi karo Gobol ama Degmo waxa waajib ah inay ku salaysnaato buuxinta shuruudaha hoos ku qoran:-
1. Baaxada Dhulka ay ku fadhido.
2. Miisaanka iyo Baaxada Dadweynaha Deegaanka ku nool.
3. Wax soo saarkeeda iyo Khayraadkeeda Dabeeciga ah Ee ay leedahay.
4. Isku filaansho iyo hanashada Adeegyada Arrimaha Bulshada, waa in ay
degmadu hanan kartaa boqolkiiba lixdan 60% miisaaniyadeeda ugu
Faahfaahinta shuruudaha Qiimeynta ee lagu magacaabi karo Gobol iyo Degmo Ee ku qoran Qodobka 3aad farqadahiisa 1, 2, 3, 4, ee Xeerkan, Wasaaradda Arrimaha Gudaha ayaa ku soo saaraysa Xeer Nidaamiiye sababaynaya, waxaana ansixinaya Labadda Gole (Guurtidda Wakiiladd), sida ku cad Dastuurka Qoddobkiisa 109aad, faqradiisa 3aad.
GOBOLADA IYO DEGMOOYINKA JSL
Jamhuuriyadda Somaliland waxay u qaybsantaa (6) Lix Gobol oo kala ah:-
Ø Gobolka Maroodi Jeex.
Ø Gobolka Togdheer.
Ø Gobolka Sanaag.
Ø Gobolka Awdal.
Ø Gobolka Sool.
Ø Gobolka Saaxil.
Gobolkiiba waxaa uu u qaybsamaa Degmooyin darajadoodu kala yihiin
Magaalo Madaxda Gobol kasta Darajadeedu waa “A” oo ah kuwan soo
MAGACA MAGAALO MADAXDA. DARAJADA.
1. Caasimadda Hargeisa. “A”
2. Burco “A”
3. Ceerigaabo “A”
4. Boorama “A”
5. Laascaanood “A”
6. Berbera “A”
DARAJOOYINKA DEGMOOYINKA DALKA.
1). Gobolka Maroodi Jeex.
MAGACA DEGMADA DARAJADA
Caasimaadda Hargeisa (Ku-meel-gaadh) A.
Dacar Budhuq. D
2. GOBOLKA TOGDHEER.
MAGACA DEGMADA. DARAJADA
Sh. Xasan Geelle D.
3). GOBOLKA SANAAG.
MAGACA DEGMADA. DARAJADA.
4). GOBOLKA AWDAL.
MAGACA DEGMADA DARAJADA.
5). GOBOLKA SOOL.
6). GOBOLKA SAAXIL.
5. Xaggal. D.
XUDUUDAHA GOBOLADA IYO SOOHDIMAHA DEGMOOYINKA
1. Xuduudaha Lixda Gobol Ee JSL ka kooban tahay waxay ku salaysan yihiin Xuduudahii ay lahaan jireen lixdii Degmo Ee Waaweynaa Ee jiray xiligii Ingiriiska ka hor 26/06/1960 Ee kala ahaa Hargeysa, Burco, Ceerigaabo, Laascaanood, Boorama iyo Berbera kuwaasoo isku beddelay Gobolladda JSL hadda ka kooban tahay.
2. Degmooyinkii hore loo magacaabay xilliyadii Xukumaddii hore ee Somaliya kana farcamay lixda Degmo ee ku xusan Qodobkan farqadiis 1aad, waxay noqonayaan Xududihii Degmooyinka xiligii Ingiriiska ee ay ka farcameen ee hadda ah Lixda Gobol ee JSL.
3. Degmooyinka darajada “D” waxa loo samayn doonaa Golayaal Deegaan marka Xuduudahooda la sugo dib u qiimayn Degmona lagu sameeyo Goleyaashuna Ansixiyaan.
4. Degmo kasta oo la magacaabo waxay xuduudaheedu ku jirayaan xuduudihii Gobolka iyo soodimihii Degmada ay ka farcantay, sida ku cad xarafyada kala ah A,B,C Ee Qodobkan.
WAX KA BEDELKA GOBOLADA IYO DEGMOOYINKA XUDUUDAHOODA
QIIMAYN IYO DARAJO KA BEDELID DEGMO
1. Degmooyinku waxay ku mutaysan karaan darajo bedelid oo noqon karta dallacaad darajo ama hoos u dhigid darajo, ama waayis marka la qiimeeyo ayada oo laga duulaayo Qodobka 12aad Farqadiisa 1aad Ee Dastuurka iyo Qodobka 3aad Ee Xeerkan.
2. Xukuumadda waxa waajib ku ah inay dib u qiimayn ku samayso Darajooyinka Degmooyinka B iyo C, muddo aan ka badnayn (12) Bilood oo ka bilaabanta taariikhda dhaqangalka xeerkan, una soo gudbiso golaha barlamaanka si uu u ansixyo.
KALA XADEYNTA XUDUUDAHA GOBOLADA & SOOHDIMAHA DEGMOOYINKA
Kala xadeynta Xuddudaha Gobollada iyo Soohdimaha Degmooyinku waa xilka Wasaaradda Arrimaha Gudaha, iyada oo kaashanaysa Wasaaraddaha iyo Hay’addaha Qaranka ee qaabka farsamo u soo geli kara, waxana ogolaanaya Golaha Barlamaanka.
WAX KA BEDDILIDDA QAAB DHISMEEDKA DALKA
Wax ka bedelka tirada Gobollada iyo Degmooyinka ama xuduudahooda iyada oo sababaysan waxa soo jeedinaya Golaha Xukuumadda waxaana oggolaanaya Golaha Wakiilada iyo Golaha Guurtida sida ku qeexan Xubinta 2aad, Qodobka 109aad, Farqadiisa 3aad.
BAAHINTA AWOODDA ISMAAMULKA
1. Awoodda ismaamulku wuxuu ku ekaanayaa, heer Gobol iyo heer Degmo sida uu tilmaamayo Qodobka 112aad Ee Dastuurka JSL.
2. Degmo kasta waxa ku waajib ah inay suurtageliso hanashada adeegyo bulsho iyo dhaqaale oo xilkoodu saaranyahay; sida caafimaadka, waxbarashada ilaa heer dugsi hoose/dhexe, nabadgelyada gudaha, xanaanada xoolaha, biyaha, nalka, isgaadhsiinta, ilaalinta deegaanka iwm, hadba heerkay hanan karaan.
1. Inta laga soo dooranayo Gole Gobol, Gobol kastaa wuxuu yeelanayaa Guddi fulin iyo Gole hor’umarineed oo ka kooban sidan soo socota:-
Guddiga Fulintu wuxuu ka koobnaan doonaa:-
1.Guddoomiye Gobol Guddoomiye
2.Guddoomiye ku Xigeen Gobol Xubin
3.Xoghayaha Fulinta Gobolka Xoghaye
2. Guddiga Fulinta Gobolka waxaa soo magacaabaya Xukuumadda Dhexe, waxaana loo magacaabayaa sida ku cad Qodobka 111aad, Farqadiisa 5aad Ee Dastuurka.
3. Guddoomiyaha Gobolka iyo ku Xigeenkiisa waxaa lagu magacaabayaa Xeer Madaxweyne, Xoghayaha Fulinta Gobolkana waxaa lagu magacaabayaa
b) Golaha Gobolku wuxuu ka kooban yahay
1. Gudoomiye Gobol Guddoomiye .
2. Gudoomiye ku Xigeen Gobol Xubin.
3. Xoghayaha Fulinta Gobolka Xoghaye.
4. Maayarada Degmooyinka Gobolka Xubno.
5. Madaxda Laamaha Dawladda ee Gobolka Xubno.
oo kala talin doona xag farsamo
oo aan cod ahayn.
XILKA GOLAYAASHA GOBOLKA
Go’aaminta Arrimaha Siyaasadeed, dhaqaale, Maamul iyo Nabadgalyo iyo
Hor’umarineed Ee saameeya Gobolka:-
v Dib u eegid Miisaaniyaddaha Degmooyinka Gobolka.
v Adkaynta Nabadgelyada iyo Suggida Amaanka.
v Dib u eegid go’aamada Maamul iyo Siyaasadeed Ee Degmooyinka Gobolka.
v Dhex-dhexaadinta Degmooyinka iyo Bulshada Gobolka.
v Dhismaha guddi hoosaadyo Goluhu u wakiilan karo hawl gaar ah.
XILKA IYO WAAJIBAADKA GUDDOOMIYAHA GOBOLKA
Guddoomiyaha Gobolku waa xidhiidhiyaha Xukuumadda dhexe iyo Degmooyinka Gobolka isaga oo hoos imanaaya Wasaaradda Arrimaha Gudaha Waajibaadka iyo xilkiisuna yahay sida tan:-
ü -Inuu horumariyo ama gaadhsiiyo Gobolka iyo Degmooyinkiisa Siyaasadda Dawladda Dhexe Ee ku wajahan dhaqaalaha, Bulshada, Nabadgalyada iyo Maamulkaba.
ü Inuu hogaamiyo Waaxaha Gobolka Ee ka wakiil ah, Hay’addaha D/Dhexe isaga oo kormeeraya qorshayaashooda wax qabad hawlgal.
ü Fulinta iyo Dabagalka meel marinta Shuruucda Qaranka.
ü Dhex-dhexaadinta Degmooyinka iyo magacaabidda Guddiga dhexaadinta Ee heer Gobol ah.
ü Xidhiidhinta iyo diyaarinta warbixin Goboleedka.
ü Xidhiidhinta D/Dhexe iyo Maamulka Gobolka iyo Degmooyinka.
ü Soo jeedinta xil u dhiibista iyo ka qaadista Mas’uulinta Laamaha Dawladda ee heer Gobol iyo Degmo.
ü Ka warbixinta Madaxda Wasaaradaha, Hay’addaha Qaranka Ee heer Gobol iyo Degmo.
ü Guddoominta Fadhiyada Golaha Gobolka.
ü Nabadgalyada & Kormeerka Gobolka.
ü Waa madaxa Hay’adaha nabadgelyada iyo maamulka ee heer gobol.
XILKA GUDOOMIYE XIGEENKA GOBOL
1. Gobol kasta wuxuu yeelanayaa Gudoomiye xigeen gobol oo xukuumaddu soo magacawdo, wuxuuna qaban doonaa xilka Gudoomiyaha Gobolka
marka uu maqanyahay iyo wixii kale ee uu Gudoomiyuhu u igmado.
2. Xilka ka qaadista Godoomiye Xigeenka waxaa iska leh Xukuumadda
XILKA IYO WAAJIBAADKA XOGHAYE FULIN GOBOL
Hagista Maamulka & Maaliyadda, Kormeerka iyo la socodka wax qabadka Shaqaalaha Xarunta Gobolka iyo hawlgalka dhamaan Hay’addaha Gobolka
(Kuwa Madaxa banaana iyo kuwa kaleba).
Qabashadda iyo Maaraynta hawlaha uu xilsaaro Guddoomiyuhu.
Diyaarinta Warbixinada Gobolka.
Dabagalka warbixinada Gobolka.
XIDHIIDHKA LAAMAHA DAWLADDA DHEXE EE HEER DEGMO IYO GOLAHA DEEGAANKA
1. Degmo kastaa waxay yeelanaysaa Gudoomiye Degmo (DC) oo ah Duqa Degmada (Mayor).
Xilka Gudoomiyaha Degmada:
b. Waa Gudoomiyaha Laamaha Dowlada Dhexe ee Heer Degmo.
t. Wuxu Gudoominayaa Fadhiyada Golaha Laamaha Dowlada ee Heer Degmo.
j. Waa Madaxa Hay’adaha Nabad Gelyada Ee Heer Degmo.
x. Waa Xidhiidhiyaha Golaha Deegaanka, Dowlada Dhexe ee Heer Degmo iyo
kh. Maamulka Gobolka.
d. Xidhiidhinta, Kormeerka iyo Diyaarinta War Bixinta Degmada.
2. Degmo kasta waxay yeelanaysaa maamul guud oo isku xidha Hay’adaha dawladda ee heer degmo oo dhan.
3. Degmo kastaana waxay yeelanaysaa Gole Horumarineed oo ka kooban; Xubnaha guddida fullinta ee golaha deegaanka, madaxda laamaha dawladda
iyoTaliyayaasha ciidamada ee heer degmo.
4. Golaha Horumarinta degmada waxa Gudoomiye u ah Duqa Degmada ahna Gudoomiyaha Degmada (District Commissioneer), Xoghayna waxaa u ah xoghayaha Dawladda Hoose .
5. Golaha horu-marinta ee Degmaddu wuxuu yeelanayaa qorshe horu- marineed oo waafaqsan kan Guud ee Qaranka.
6. Xoghayaha dawladda Hoose iyo madaxda laaamaha dawladda ee heer degmo waa guddida farsamada ee heer degmo.
7. Madaxda laamaha Dawladda iyo Taliyayaasha ciidamada ee heer degmo iyaga oo ka tirsan hay’adahoodii, waxay u hogaansamayaan talooyinka iyo awaamiirta kale ee kasoo fula gudoomiyaha Degmada, isla markaasna waxay si joogto ah ula socodsiinayaan warbixin maalmeedka (daily report), Bileedka (monthly) iyo tan sannadkaba (yearly).
8. Gudoomiyaha Degmadu mar kasta oo baahi shaqo ka timaado dhinacyada nabadgelyada iyo maamulkaba, wuxuu ku amrayaa taliyaha saldhiga booliska (District police commissioneer)ee degmada inuu hawlgelyo ciidanka.
9. Taliyaha Saldhigana waxa waajib ku ah inuu fuliyo awaamiirtaas kasoo baxday gudoomiyaha degmada, isaga oo la socodsiinaya taliskiisii ciidan ee Gobol iyo Guudba.
Tirada Mudanayaasha Golayaasha Deegaanka Ee Dawaladdaha hoose waxay ku salaysan yihiin darajooyinkooda oo kala ah: -
Caasimadda Hargeysa 25 Xildhibaan.
Degmooyinka Darajada “A” 21 Xildhibaan.
Degmooyinka Darajada “B” 17 Xildhibaan.
Degmooyinka Darajada “C” 13 Xildhibaan.
Degmooyinka Darajada “D” 9 Xildhibaan.
1. Doorashada Mudanayaasha Goboladda iyo Degmooyinka JSL waxa lagu dhaqayaa Xeerka Doorashooyinka Ee markaas dhaqan galka ah.
2. Golayaasha Deegaamadu xil gudashadoodu waa tabaruc mana yeelanayaan hawl maalmeed joogto ah marka laga reebo Guddiga Fulinta iyo guddida joogatada ah.
3. Golayaasha Deegaanku waxay ku iman doonaan Tartan doorashooyin Ee Nidaamka Saddexda Xisbi Qaran Ee loolanka Golayaasha Deegaanka.
MUDDADA XILKA GOLAHA
1. Mudada Xilka Mudaneyaasha Golaha Degmada waa shan (5) sanno oo ka bilaabmanta maalinta Maxkamaddu Go’aanka doorashada ku dhawaaqdo.
2. Xilka Golehii hore ee Degamdu, wuxuu ku egyahay (14) Afar iyo toban cisho ka dib, maalinta Maxkamaddu ku dhawaaqdo Go’aanka Doorashada Mudanayaasha cusub.
3. Inta Duqa iyo Ku-Xigeenkiisa cusub la soo dooranayo waxa xilka sii haynaya Xubnihii Guddiga fulinta ee hore, balse waxa ka reeban: -
b. Qandaraas bixin qalab, Gaadiid, iyo maalgalin mashaariiceed.
t. Xaraash amba bixin Hanti Golaha Degmadu leeyahay.
j. Shaqaale qoris, Dallacaad, Beddelaad iyo Ruqsayn.
x. Magacaabis Guddiyo ama Saraakiil.
Kh. Saxeex heshiis Dawladda hoose dhinac ka tahay.
d. Bixinta iyo qorshaynta dhul cusub.
r. Gelida kharashyada ka baxsan kuwa joogtada ah sida mushaharka,
s. gunada shaqaalaha, shidaalka iwm.
1. Mudanaha la doortay waxaa ku waajibay u feejignaanta iyo la socodka baahida iyo tabashada daweynaha, Xilna ka saaran yahay inuu u soo gudbiyo Golaha Deegaanka ee uu ka tirsan yahay
2. Wacyigelinta iyo xidhiidhinta daweynaha asaga oo ku hanuuninaya kaalinta ay kaga jiraan horumarinta Deegaankooda.
3. Inuu hormood ka noqdo, Horseed, abaabulo arrimaha daryeelka iyo horumarinta Bulshada sida Caafimaadka waxbarashada, Biyaha, Laydhka, Nadaafadda Guud I.W.M.
4. Inuu si daacadnimo, Xilkasnimo iyo wadaniyad leh u fuliyo waajibaadka iyo xilka ka saran xubinimada Golaha Deegaanka.
DIIWAANGALINTA HANTIDA MUDANAYAASHA.
1. Golaha Deegaanku wuxuu diyaarinayaa Xeer-hoosaad la xidhiidha hab dhaqanka laga rabo mudaneyaasha.
2. Marka Xeer-hoosaadka la diyaariyo, waxa ansixinaya Golaha Deegaanka waxaana loo soo gudbinayaa Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha oo Xeer midaynaya Degmooyinka dalka soo saaraya.
3. Marka Xeer-hoosaadka la ansixiyo ka dib waxa waajib ku ah dhammaan mudaneyaashu inay ku dhaqmaan.
DHAWRSANAANTA XUBINTA GOLAHA.
1. Xubinta Golaha cabiraada fikirkiisa iyo aragtidiisa waa u xor.
2. Way ka reeban tahay xukunkaas farqada 1aad ee Qodobkan wixii cay ah ama aflagaado ah ee xubintu geysato.
3. Xubinta Golaha lama qaban karo haddii aan oggolaansho laga haysan Golaha ama aanu fal dambiyeed faraha kula jirin.
4. Xubin gole Hay’addaha baadhistu way u yeedhan karaan haddii hawl baadhiseed ka soo gasho.
WAAYIDDA XUBINIMADA MUDANAHA
Shuruudaha ka reeban laguna waayi karo xubinimada Golaha Degmada waxaa ka mid ah hadduu: -
1. Xubinta Geeri ku timaado ama xannuun suurtagalin waaya gudashada xilkiisa oo Guddiga Dhakhaatiirta Gobolku caddayso.
2. Istiqaalad qoraal ah keeno, iskiisna shaqada uga tago, Goluhuna oggolaado.
3. Shuruud ka mid ah shuruudihii lagu soo doortay haddii ay burto.
4. U hoggaansami waayo ama uu jabiyo Xeer Hoosaadka Golaha Degmada, Goluhuna ku ansixiyo kala badh mid lagu daray tirada Guud.
5. U ololeeyo ka faa’iidaysi dan gaar ahaaneed xubinimadiisa.
6. Caadaysto lunsi hanti qaran, laaluush, eex, Qabyaalad iyo qaraabo kiil.
7. Abuurid ama ka qayb qaadasho hawlo lid ku ah Nabadgelyada iyo Xasiloonida qaranka.
8. Ka maqanaado Golaha (10) toban fadhi oo isku xiga Sabab la’aan.
9. Ku dhaco xukun Ciqaabeed oo Kama dambays ah oo Maxkamadeed.
10. Haddii ay ku cadaato Lana Xaqiijiyo inuu Xil kale oo Qaran hayo.
11. Haddii uu la yimado Anshax xumo Diineed ama mid dhaqan.
EEDAYNTA XUBINIMADA MUDANAHA
1. Xubnihii la doortay Xubin ka mid ah haddii lagu soo oogo dacwad lid ku ah xubinimadiisa waxaa loo maraya Maxkamadda ay khusayso.
2. Xisbina ma bedelan karo xubin Golaha Deegaanka ah haddii aanay ku sifoobin shuruudaha ku cad Q.26aad.
1. Xoghayaha Fulintu wuxuu diiwaangelinayaa, una bandhigayaa Duqa Xubnaha jagooyinkoodu bannaanaadeen sababahan soo socda dartood :-
a)Hadduu ku sifoobo shuruudaha waayitaanka ee ku xusan Xeerkan Q.26aad.
2. Marka ay jago bannaanaato, waxaa jagadaas lagu soo buuxinayaa hal Bil gudaheed, laga soo bilaabo taariikhdii Duqu ku dhawaaqay Jagadaas bannaanaatay.
3. Jagadaas bannaanaatay waxaa soo buuxinaya xisbigii laga soo doortay xubinihii murashixiinta tartantay ka hadhay ee dhacay , sida ay u kala horeeyaan.
ISTIQAALADDA XUBINTA MUDANAHA AH.
1. Mudanuhu wuu iska casili karaa Xilka isaga oo istiqaalad qoraal sababaysan u gudbinaya Duqa Degmada, waxaana ansixinaya Duqa Degmada, ka dib markuu oggolaansho ka helo Golaha Deegaanka .
2. Xubinta istiqaaladda dhiibtay, goluhuna ka aqbalay, wuxuu Duqa Degmadu qoraal toos ah u soo gudbinayaa Guddoomiyaha Gobolka oo u gudbindoona Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha oo ku soo saari doona xeer wasiir una gudbin doona Guddiga doorashooyinka, xisbigii uu ka tirsanaa si loo soo buuxiyo Jagada banaanaatay,lana waafajiyo sharciga xubinta banaanaatay iyadoo la marinaayo Maxkamada Gobolka ee ay khusayso oo leh sharciyaynta iyo Diiwaangalinta.
1. Marka ay (3) kalfadhi oo is xiga sabab la’aan, Degmooyinka Darajada “A” & “B” fadhiyadoodu u qabsoomi waayaan. Degmooyinka Darajooyinka C, & D hadii 4 Kalfadhi oo isku xiga sabab la’aan u qabsoomi waayaan.
2. Marka ay (1/3) xubnaha Goluhu soo jeediyaan (2/3) Na ansixiyaan.
3. Marka guddi gaar ah oo xilkas ah oo heer qaran ah oo madax banana uu Madaxweynuhu u magacaabo inay soo baadhan gafafka dhacay ee lidka ku ah xil gudashadooda warbixin cadna ka keenan
4. Marka dadweynihii soo doortay ee Degmooyinka Darajada “A” (5,000) Shan Kun oo Qof Maxkamadda Gobolka iska diiwan galiyaan kuna hor saxeexaan, soona jeediyaan in la kala diro Golaha sidoo kale Degmooyinka Darajooyinka “B” “C” & “D” na waa 2000 oo Qof.
5. Dadweynaha soo jeedinaaya Codsiga kala dirida wax u shardi ah inay deggan yihiin Degmada kana diiwaan gashan yihiin, isla markaana buuxiyaan shuruudaha Codeynta Ee sharciga doorashooyinku jideeyeen.
6. Marka Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudduhu ku qanco, hubiyana, Xaqiijinta ama ay jabiyeen Shuruudaha ku xusan Qoddobkan ee Sababta kala diridda Golaha Deegaanka, Waxaa uu Wasiirku Awood u leeyahay in uu soo jeediyo kala dirrida Golaha, una gudbiyo Madaxweyanaha oo leh Awoodii kama danbaysata ah ee kala diridooda, Iyada oo loo marayo Maxkamadda Awooda u leh kala dirridooda (Heer-Gobolka).
MUDADA KALA GUURKA.
1. Marka la kala diro Golaha Deeganka waxaa soo buuxinaya Kuraasta Banaanaatay Kaydkii Axsaabta Siyaasiga ah oo ku salaysan mid waliba saamigi uu ku lahaa Golihii hore.
2. Mudada kala Guurka ah ee u dhaxaysa Golihii hore ee la kala diray inta lagu soo buuxinayo Kuraasta banaanaatay Kaydkii Axsaabta Siyaasiga ah ee ay ku kala lahaayeen Deeganka, waxaa xilka sii haynaya Xoghayaha Fullinta iyo Madaxda Waaxyaha ama Laamaha Wasaaradaha, kuwaasi oo xilka sii fulinaya iyagoo raacaya Shuruudihii hore, inta la soo buuxinayo, kuwaas oo noqon doona Golihii cusbaa.
DHISMAHA IYO XILKA GOLAHA DEEGAANKA
DHISMAHA GOLAHA DEEGAANKA
Golaha Deegaanka wuxuu yeelanayaa: -
a) Guddiga Fulinta
b) Guddiga Joogtada iyo
c) Guddi Hoosaadyo iyo guddiyo tuulooyin oo hoos yimaadda Golaha Deegaanka Degmada
Guddiga fulinta Golaha Deegaanka Degmada waxay ka kooban yihiin: -
1. Duqa Degmada Guddoomiye
2. Ku-Xigeenka Duqa Degmada ku-Xigeen
3. Xoghayaha Fulinta Xoghaye
Guddiga joogtada ah ee Golaha Deegaanka Degmadu waxay ka kooban tahay: -
1. Duqa Degmada.
2. Ku-Xigeenka Duqa Degmada.
3. Xoghayaha Fulinta.
4. Guddoomiyeyaasha Guddi hoosaadyada Golaha Degmada.
DHISMAHA GUDDI HOOSAADYADA GOLAHA DEEGAANKA.
1-Golaha Deegaanku Degmooyinka Darajooyinka A & B afar Guddi Hoosaad oo kala ah: -
b) Guddiga Dhaqaalaha iyo horumarinta oo u xilsaaran kormeerka :
1. kobcinta dhaqaalaha iyo hirgelinta mashaariicda
2. Dib u eegista & talo ka bixinta Xisaab xidhka
3. Isku xidhka iyo dhiirigelinta Mashaariicda isku tashiga
4. Abuuridda Ilo dhaqaale oo cusub
5. Dib u eegista & dabagalka miisaaniyadda.
t) Guddiga Nabadgelyada iyo dhe-dhexaadinta oo u xil saraan: -
1. Nabadgelyada dhex-dhexaadinta iyo xallinta khilaafaadka ka soo dhex baxa Degmada
2. La socodka, la xisaabtanka iyo ka warbixinta hay’adaha nabadgelyada ee heer Degmo.
j) Guddiga arrimaha Bulshada oo u xilsaaran kormeerka iyo ka warbixinta: -
1. Caafimaadka, Waxbarashada, Deegaanka, Biyaha, Laydhka, Daryeelka Misaajidada iyo malcaamadaha, Nadaafadda, Ciyaaraha, Fanka iyo Suugaanta.
Kh) Guddiga hawlaha Guud oo u xilsaaran kormeerka iyo ka war bixinta: -
- Jaangoynta Dhulk, Diiwaangelinta, qorshaynta bixinta
Guud iyo naqshadaynta.
- Jaangoynta aagag qaybinta sida warshadaha, Ganacsiga, Dalxiiska, Safaaradaha, Ciidamada, degaanada dadweynaha I.W.M.
- Qorshaynta iyo kala soocidda dhulka leh istimaalka Rasmiga ah iyo kan ku meel-gaadhka ah.
- Adeega Hawlaha Guud
2. Golaha Degmadu wuxuu kulankiisa caadiga ah ee ugu horreeya Sannad kasta, iska dhexdooranayaa Guddi Hoosaadyada ku xusan lambarka 1aad ee Qodobkan,
3. Xubnaha Guddi Hoosaad kastaa waa inayna ka yaraan (3) xubnood kana badnaan (5) xubnood.
4. Xubin kasta ee Golaha Deegaanku hal Guddi ayey xubin ka noqon kartaa.
5. Degmooyinka Darajooyinka C & D waxay yeelanayaan laba Guddi hoosaad oo kala ah: -
a. Guddi hoosaadka Arrimaha Dhaqaalaha iyo Hawlaha Guud
b. Guddi hoosaadka Nabadgalyadda iyo Arrimaha Bulshada.
6. Gole kasta waxaa uu xubnaha Guddi Hoosaadyada dhexdooda ka dooran doonaan Guddoomiyayaashooda.
1. Xubnaha Golaha Maamul ee Tuulada waxa soo jeedinaya Gudoomiyaha Degmada isagoo la tashanaya Ganacsatada, Odayaasha & Waxgaradka Tuulada, waxana ogolaanaya Golaha Deegaanka.
2. Tirada Guddiyada tuulooyinka waa inaanay ka badan (7) xubnood , waxaanay isu sii qaybin karaan guddi Hoosaadyo.
XILKA GOLAHA DEEGAANKA
1. Golaha Deegaanka wuxuu awood buuxda u leeyahay hawl kasta oo ka mid ah kuwa lagu tilmaamay qodobkan oo looga fadhiyo ka midho dhalintiisa ee ku jira xadka Degmadooda, sida:
b) Xoojinta iyo kor u qaadista Nabadda, deganaanshaha, kala dambaynta iyo wanaajinta xukunka Dawliga ah.
t) Kobcinta iyo kor u qaadista dhaqaalaha.
j) Kobcinta iyo kor u qaadista Arrimaha Bulshada, sida waxbarashada, Caafimaadka, Biyaha, Laydhka, Nadaafadda I.W.M.
x) Wax ka qabadka iyo hagaajinta deegaanka, Dhiraynta, Xoolaha iyo fulinta Awoodda kaabayaasha dhaqaalaha I.W.M.
Kh)Aasaasida suuqyo badeeco, xoolaha iyo Kaluunka
d) Kormeerka dhismooyinka cusub, kuwa la cusboonaysiinayo iyo kuwa u baahan in la dumiyo.
r) Ka hor tagga dhibaatada abaarta, duufaanada, dabka halista ah iyo dhibaato kasta oo wax u dhimi karta dadweynaha .
s) Daad guraynta dadweynaha hadii aafo dhacdo.
Sh) Diyaarinta iyo fulinta barnaamijyada iyo Mashaariicda horumarineed.
Dh) Horumarinta Fank, Isboortiga iyo Suugaanta.
c) Dhismo goobo biyood oo magaalooyinka iyo tuulooyinka dhexdooda ah.
1. Samaynta iyo dayac tirka wadooyinka.
2. Soo jeedinta iyo codsiga wax ka beddalka iyo habaynta Naqshadda magaalooyinka Degmadu ka kooban tahay.
3. Diiwaan gelinta dadweynaha Degmada.
4. Diwaan galinta hantida ma guurtada ah ee dadweynaha Degmada ku nool iyo tan Dawladaba.
g) Habaynta iyo aasaasida goobo ganacsiga iyo farsamo oo loogu danaynaayo dadweynaha.
f) Diyaarinta iyo oggolaanshaha dib u eegista Miisaaniyadda D/Hoose.
k) Daryeelka Horumarinta Miyiga iyo dhiirigelinta wax soo Saarka iyo abaabulidda
l) Dhiirigelinta Mashaariicda isku tashiga Bulshada.
m) Habaynta Hawlaha aaska ( Qubuuraha ) astaynta dhulka Qabuuraha.
n) Samayn goobo nasasho, wax akhris iyo Daawasho.
h) Ilaalinta iyo Daryeelka Goobaha taariikhiga ah.
2. Goluhu waa inuu leeyahay jaangoyn iyo qorshe uu ku fuliyo ama kaga midho dhaliyo wax-qabadkiisa iyo waajibaadkiisa.
3. Awoodda Golaha waxa ka mid ah waxqabad kasta oo wax loogu kordhinayo dad ama goob dibadda uga baxsan Deegaanka Degmada, haddii loo arko inay muddan tahay waxtar marka oggolaansho laga helo Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha.
4. Goluhu wuxuu dejinayaa jaangooyo mudaysan oo ku wajahan horumarinta iyo kor u qaadida Nabadgalyda iyo xasiloonidda, dhaqaalaha Arrimaha Bulshada iyo ilaalinta Deegaanka Degmada, oo la jaan qaadaysa jaangoynta horumarinta Dalka JSL.
5. Goluhu wuxuu awood u leeyahay inuu jaangooyadiisa isbedel ku sameeyo,
isaga oo la jaanqaadaya xawliga horumarka Dalka Jsl.
6. Goluhu markuu jaangooyadiisa wax ka bedalayo, waxa uu tixgalinayaa Barnaamijka Qorshaynta Qaranka.
i) Goluhu wuxuu awood u leeeyahay inuu heshiis la galo ciddii faaiido ugu jirto dalka debediisa iyo gudihiisabe iyadoo la waafajinayo shuruucda dalka u dejisan.
QODOBKA 37 AAD
XADIDAADA AWOODDA GOLAHA.
1. Waxaa ka reeban wax kasta oo ka hor imanaya Diinta, Dhaqanka, ama Xeerarka dalka.
2. Waxaa ka reeban inuu ka hor-yimaado siyaasadda, qorshayaasha iyo Barnaamijka xukuumadda sida ku cad Q.110, faq/1aad ee Distoorka.
XILKA GUDDIGA FULINTA GOLAHA DEEGAANKA DEGMADA.
Xilka Guddiga fulinta Golaha Deegaanka waxa uu yahay: -
1. Fulinta hawl maalmeedka maamulka ee Degmada
2. Kormeerka iyo hubinta habsami u socodka hawlaha Degmada.
3. Fulinta meel marinta iyo dhaqangelinta Go’aanda Golaha Deegaanka Degmada.
4. Fulinta shuruucda, Xeerarka, iyo Go’aamada iyo amarada ka soo fula guddiga joogtada Golaha Deegaanka Degmada iyo xukuumada.
5. Diyaarinta fulinta iyo ku dhaqanka Miisaaniyadda.
6. Dhaqangelinta meelmarinta iyo kormeerka mashaariicda horumarineed.
7. Diyaarin warbixino fulineed ee hawlaha qabsoomay kalfadhiyada dhexdooda iyo wixii aan qabsoomin usoo bandhigidooda Guddida joogatada ah.
8. Usoo bandhigida guddida joogatda amarada degdeg ah ee ka soo baxa Xukuumadda ee aan sugi karayn kalfadhiga Golaha.
9. Awoodaha Fulinta ee Golaha waxaa ka mid ah: -
b. Isticmaalka kharashyada.
t. Qabto, bixiyo dhul iyo hanti kale dan guud awgeed ka dib
j. arkuu ogolaansho ka helo guddida joogtada ah.
x. Soo jeedin cashuur Dejin, Kordhin, Dhimis, qiimayn iyo khidmad saarida liisamada, iyo adeegyada kale.
Kh.Waxay heshiisyo la gali karaan cid kasta oo dani dhex-mari arto wixii heer Degmo ah.
d.Waxay la xidhiidhi karaan macaamilna la yeelan karaan Shirkad, qof iyo wixii ka badan ee khuseeya xilkooda.
r. Waxay matali karaan cid kasta iyo hawl kasta oo qayb ay ka tahay D/Hoose.
s. Waxay bixin karaan shaqaale, qalab, Adeeg iyo hoy mar kasta oo baahi timaado dan guud awgeed.
10. Dejinta iyo usoo jeedinta golaha qorista shaqaalaha D/Hoose ee joogatda ah.
11. Shaqaalaha Dawladda Hoose iyo Wakaaladdaha Biyahu waxay Wasaaradda Arrimaha Gudduhu u samaynaysaa Xeer-nidaamiye u gaar ah.
12. Ogolaanshaha fasaxa xubnaha Golaha Degaanka.
XILKA GUDDIDA JOOGTADA AH.
1. Xilka guddida joogtada ah ee Golaha Deegaanka Degmada waxay si ku meel gaadh ah u soo saarayaan go’aano muddada u dhaxaysa kal-fadhiyada Golaha Deegaanka
2. Waxay yeelanayaan Fadhiyo muddada u dhaxaysa kalfadhiyada caadiga ah ee Golaha Deegaanku u dhan yahay, waxay si ku meel gaadh ah awood u leeyihiin iney go’aan ka gaadhaan arrimaha xaasaasiga ah, lama filaanka ah ee aan sugi karayn kal fadhiga caadiga ah, sida nabadgelyo, siyaaso iyo maamulba ee kaga yimaadda:
b. Xagga Xukuumadda
t. Guddi hoosaadka Golaha Deegaanka
j. Dhinaca maamulka ama dareenka iyo rabitaanka dadweynaha arrimaha ka soo jeeda.
x. Arrimaha lama filaanka ah sida aafooyinka I.W.M.
3. Guddida joogtada ah ee Golaha Deegaanka waxay go’aannadii ku meel gaadhka ahaa ee ay gaadheen u gudbinayaan golaha loo wada dhan yahay fadhigiisa ugu soo horeeya.
4. Waxay Ogolaanayaan Fasaxa Duqa iyo Ku Xigeenkiisa.
XILKA IYO AWOODDA DUQA.
1. Waa Gudoomiyaha maamulka Degmada ahna Duqa Golaha.
2. Shirguddoonka Golaha Deegaanka, Guddida Fulinta & Gudida Joogtada ah ahna afhayeenka Golaha
3. Hawlgelinta iyo fulinta Qorshayaasha wax-qabad ee Degmada.
4. Fulinta Go’aamada Golaha.
5. Isuduwidda hawlaha kala duwan. Diyaarinta iyo Gudbinta warbixinada khuseeya Dabagalka iyo fulinta shuruucda
6. Soo jeedinta miisaaniyadda
7. Soo jeedinta Xeer hoosaadyo, isaga oo horkeenaya Golaha Deegaanka
8. Soo saarid qaraaro iyo saxeexidooda oo la xidhiidha fulinta iyo
9. Dhaqan galka go’aanada iyo amarada ka soo baxa golaha
10. Saxeexyada heshiisyada D/Hoose ee ay dhinac ka tahay.
11. Oggolaanshaha iyo saxeexyada kharash bixinta ( Jeegaga )iyo foojarada.
12. Ku hadalka magaca Golaha iyo ka warbixinta arrimaha Degmada.
13. Waa gudoomiyaha Hay’adaha Ilaalinta nabadgelyada iyo laamaha Hay’addaha Dawladda ee Heer Degmo.
14. Wuxuu xubin ka yahay Golaha Horumarinta ee Gobolka .
XILKA KU-XIGEENKA DUQA.
1. Xaalad kastaba marka Duqu is casilo, la rido (Xilka laga qaado), maqnaado, bukoodo, geeriyoodo, waxa xilkiisa qabanaya ku-Xigeenka Duqa.
2. Ma banana inuu duqu ku wareejiyo qaybo ka mid ah xilkiisa iyo awoodihiisa cid kale oo aan ahayn ku xigeenkiisa, markay xaalada ku xusan farqada kowaad ee qodobkan timaado.
3. Wixii kale ee hawl ah ee Duqu u idmado ku Xigeenkiisa.
WAAJIBAADKA GUDDI HOOSAADKA GOLAHA DEEGAANKA
1. Waajibaadka guddi Hoosaad kasta saaran ka sokow, waxay wadaagaan xilalkan: -
2. Kormeerka, hubinta, Dabagalka iyo suggida habsami u socodka go’aanadii ka soo baxay Golaha Deegaanka.
3. Ka tala bixinta toosinta iyo sixidda wixii ka qaloocan waaxyaha maamulka.
Dhiirigelinta iyo gacansiinta waaxyaha Dawladda Hoose haddii ay carqalad kala kulmaan meelmarinta go’aanadda Golaha Deegaanka iyo fulinta dhinaca maamulka.
4. Ururinta xogta dadweynaha ee la xidhiidha cabashooyin iyo dacwooyinka ay ka tirsanayaan Saraakiisha hawlwadeenada Xarunta iyo shaqaalaha Waaxyaha Ee D/hoose.
5. Diyaarinta tabashada Dadweynaha ee xal u helidda iyo wax ka qabadka u baahan kana mid noqon karta qodobada Ajandaha la horgeyn karo Golaha Deegaanka Degmada.
WAXA KA REEBAN GUDDI HOOSAADKA.
Guddi Hoosaadka Golaha Deegaanka waxaa ka reebban inay: -
1. Inay hawlaha Waaxyaha gacanta ku dhigaan oo la wareegaan hawlsocodsiinta waajibaadka waaxyaha
2. Inay saxeexaan dhokumenti la xidhiidha :-
t. Mulkiyadaha Dhulka
j. Waraaqaha Caddaynta, Xaqiijinta, hubinta iyo ansixinta soo eegis dhul.
Kh. Buugaagta maamulka lacagta iyo kharash gelida.
3. Amar siin toos ah oo ku wajahan waaxyaha D/Hoose ama goob shaqo iyo shaqaalaha.
4. Samayn Xeer Hoosaad.
5. Samayn Cashuur dhaafid.
XILKA XOGHAYAHA FULINTA.
1. Xoghayaha Fulinta waa Sarkaalka ugu sarreeya Saraakiisha Maamul fulinta waaxyaha maamulka Degmada,
b) Xidhiidhinta shaqada waaxyaha iyo qaybinta awaamiirta dawliga ah.
t) Hubinta fulinta Go’aamada Golaha iyo Awaamiirta Duqa Degmada
j) La socodka iyo jaanqaadka waaxyaha iyo hubinta adeega.
x) Soo ururinta iyo hubinta warbixinada waaxyaha.
Kh) Hubinta iyo dhiirigelinta qorshe hawleedka waaxyaha.
d) Dhiirigelinta go’aan wadaagga madaxda waaxyaha .
r) Hoggaaminta waaxyaha Dawlada Hoose.
s) Ka warbixinta shaqaalaha soo jeedinta qoristooda, dallacsiintooda darajadooda iyo ruqsayntooda
Sh) Diyaarinta Miisaaniyadda iyo ku dhaqankeeda.
Dh) Diyaarinta xisaab-xidhka iyo ka warbixinta dhaqaale.
c) Hubinta iyo kormeerka goobaha Cashuur ururinta iyo Dakhliga.
g) Sugidda, dabagalka iyo ilaalinta hantida Dawladda Hoose Degmada.
f) Hubinta, Saxeexyada foojarada, Jeegaga kharash bixinta iyo gelida saxeexa codsiyada kharashyada caadiga ah ee hawl socodsiinta maamulka Degmada.
q) Wuxuu mas’uul ka yahay diyaarinta ajendayaasha, marka uu la shato Gudoomiyaha Degmada, Hadalqoraalada Doodda, gudbinta Dokomentiyada, talo bixinta, koobidda nuxurka shirarka ee Golaha, Guddiga Joogtada ah, Guddiga Fulinta iyo kuwa aan joogtada ahayn ee guddi hoosaadyada.
k) Wuxuu mas’uul ka yahay qabashada waajibaad kasta oo sharci ku fadhiya ama amaradda la faray ee uu siiyey Duqa Degmada, Xoghayaha Fulintu isaga oo raacaya Xeerkan is maamulka Gobollada iyo Degmooyinka ama amarada Golaha, wuxu leeyahay isticmaalka dhamaan Awoodaha fulineed iyo waxqabad ee Xeerkani siiyey.
MAGACAABIDA XOGHAYAHA FULINTA
1. Xoghaya Fullintu waa sarkaal ka tirsan Wasaaradda Arrimaha Gudaha, Magacaabistiisana waxa iska leh Wasiirka Arrimaha Guddaha.
2. Xil ka qaadistiisana (Xoghayaha Fullinta) waxa iska leh Wasiirka Arrimaha Guddaha, kadib marka uu helo Go’aanka Guddigga Joogtadda ee Golaha, kuwaasi oo marka hore digniin kama dambays ah siinaya. Digniintaas kadib marka ay Go’aankood u gudbiyaan Wasiirka, waxa waajib ku ah Wasiirka in uu muddo 21 maalmood gudahood ah ku dhammaystiro magacaabista Xog-hayha cusub.
3. Muddada la soo magacaabayo Xoghayaha Cusub waxaa hawsha si ku meel gaadha u sii wadaya Agaasimaha Waaxda Maamulka D/hoose ee Degmadda.
Shuruudaha lagu xulanayo Xoghayaha:
a. Waa in yahay muwaadin Somalilander ah
b. Waa inuu yahay muslin kuna dhaqmaa diinta islaamka
c. Waa inaanay da’diisu ka yarayn 30 sano
d. Waa inuu leeyahay aqoon dugsi sare ama wax u dhigma
e. Waa inuu maamulka u leeyahay waayo aragnimo aan ka yarayn 5 sano.
f. Marka laga reebo Degmooyinka ‘A’ iyo Caasimadda, oo looga baahanyahay aqoon jaamacadeed ama wax u dhigma, haddiise waaya aragnimadiisa shaqo gaadhsiisantahay 10 sano iyo wax ka badan waxaa loogu qiimayn karaa heer jaamacadeed.
g. Waa inaanu ku dhicin xukun maxkamadeed shantii (5) sano ee u danbeeyey.
h. Waa inuu jidh ahaan iyo maskax ahaanba caafimaad qabaa
i. Waa inuu yahay xilkas, akhalaaqdiisa iyo dhaqankiisuna toosanyahay.
j. Waa inaanu xil kale oo dawladeed haynin.
MUSHAHARKA & GUNNADA XILKA XOGHAYAHA FULINTA.
1. Mushaharka Xoghayaha Fulinta waxay la mid tahay oo ay ku salaysnaan doontaa darajooyinka Shaqaalaha Dawladda Dhexe hadba tii aqoontiisa ku mutaysto oo xaqiininjteeda Wasaradda Arrimaha Guduhu qoraal ku soo saarayso (L.P.C)
2. Gunnada xilka Xoghayaha Fulinta waxaa xadidaaya oo awood u leh Golaha.
3. Mushaharka iyo Gunnadiisaba wuxuu ku leeyahay oo laga bixinayaa Miisaaniyadda D/hoose Ee Degmada.
KULAMADA, SHIRARKA IYO XEERHOOSAADYADA
1. Kalfadhiyada Golaayasha Degmooyinka Darajada “A & B” waxa uu qabsoomayaa Labadii biloodba mar, muddada kalfadhiguna waa (20) cisho, Kulamada Guddi hoosaadyaduna waxay ku caddaan doonaan Xeerhoosaadyadooda.
2. Degmooyinka Darajada “C” & “D” wuxuu kalfadhigoodu qabsoomayaa sadexdii biloodba mar, muddada kalfadhiguna waa (10) cisho, Kulamada Guddi hoosaadyaduna waxay ku cadaan doonaan Xeerhoosaadyadooda.
3. Golaha Degmaddu shir aan caadi ahayn waxaa isugu yeedhi kara: -
b. Duqa Degmada.
t. Codsi qoraal ah oo ay soo gudbiyaan xubnaha Golaha Deegaanka
oo aan ka yarayn (1/3) tirada xubnaha.
j. Codsi Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha ka yimaada.
4. Shirka aan caadiga ahayn, sababaha qabashadiisu waa inay ku cadyihiin qoraal, lagu soo cadeeyo Ajendaha shirarkaas.
5. Ajendaha shirka wixii ka baxsan Goluhu way ka doodi karaan haddii mawduuca markaa laga hadlayo uu ka dhasho, ama ugu yaraan 3 mudane soo jeedin qoraal ah ugu soo jeediyaan guddida fullinta, ama xukuumaddu soo jeediso ama uu ku yimaado xaalado kale oo in laga hadlaa muhim tahay.
1. Kulan kasta oo ay yeeshaan Golaha Degmada, guddida joogtada iyo guddida fullinta waxaa Guddoominaya: -
b. Duqa Degmada
t. Ku-Xigeenkiisa marka uu ka maqan yahay Degmada iyo haduu u
2. Duqa Degmadu 30 Maalmood wax ka badan Safar Dibadeed oo shaqo rasmi ah kuma maqnaan karo, haddii aanay jirin xaalad caafimaad oo qoraal dhakhtar lagu soo cadeeyay.
QABSOOMIDDA SHIRARKA GUDIDA FULINTA.
1. Go’aamada Guddida Fulinta iyo tan Gudida joogtada ah ay gaadhaan waxay dhaqan galayaan marka Duqu ku soo saaro Qaraar Saxeexan.
SHIRARKA CAADIGA AH EE GOLAHA
Shirarka Caadiga ah ee Golaha Degmadu way u furan yihiin markay u oggolaadaan shir guddoonku inay ka soo qaybgalaan xubno sharaf ka tirsan dadweynaha iyo saxaafadda.
KOORAMKA IYO GO’AAMADA SHIRARKA.
1. Shirarka Golaha Degmada ama Guddi Hoosaadyadu waxay qabsoomi karaan marka ay xubnaha Golaha iyo Guddi Hoosaadyadu joogaan kala badh hal lagu daray “Quorum”.
2. Go’aamada shirarku waxay ku ansaxayaan kala badh hal lagu daray tirada xubnaha fadhiya shirkaas.
3. Qaabka doorashada iyo cod bixintu waxay noqonaysaa Gacan taag, haddii aanay shirgudoonka ama 1/3 xubnaha goluhu soo jeedinin codka qarsoodiga ah, goluhuna ogolaanin.
4. Haddii ay isleekaadaan tirada codadka labada dhinac oo ay sinmaan, Gudoomiyuhu wuxuu yeelanayaa Hal cod ( dhinaca uu Raaco ), ayayna ku ansaxaysaa.
5. Maayarka Degmadu haddii uu ka qaybgalo shirarka Guddi Hoosaadyada, wuxuu ku leeyahay talo soo jeedin, balse cod dhiibasho kuma laha (Vote).
1. Dhammaan sharciyada, Go’aamada iyo hindisayaasha uu ka kooban yahay kulamada Golaha oo dhan waa in la diiwaangeliyaa (Registered).
2. Magacyada mudanayaasha jooga shir kasta ama dadka aan xubnaha ka ahayn ee lagu martiqaaday shirkaas (Goobjoogayaal) waa la diiwaan galinayaa.
3. Hadalqoraalka iyo go’aamada ka soo baxa shirkaas waxaa wada saxeexaya Duqa oo shirguddoonka ah iyo Xoghayaha fulinta.
4. Go’aamada ka soo baxa shirarka Golaha Deegaanka, oo ay ku cad yihiin saxeexyada Duqa iyo Xoghayaha waxay Hay’adaha sharcigu u aqoonsanaysaa markhaati cad oo Rasmi ah.
5. Golaha Deegaanka Degmada waxa ku waajib ah inay daweynaha u soo bandhigaan Go’aamada ay gaadhaan iyaga oo ku dhejinaya meelaha ogeysiisyada, kana sii daayaan qalabka warbaahinta, haddii ay yihiin arrimaha u baahan gaadhsiinta dadweynaha.
6. Golaha Degmada waxaa ku waajib ah hadal qoraaladda shirarka waa in si degdeg ah (7) todoba Cisho gudahood loogu gudbiyo Guddoomiyaha Gobolka iyadoo nuqulna la siinayo Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha, Nuqulna la siiyo Guddoomiyaha Gobolka.
HABKA SHIRARKA GOLAHA IYO GUDDIYADIISA KALE.
1. Muuqaalka iyo maamuuska fadhiga Goluhu wuxuu u kala baxayaa: -
b) Shir Guddoonka iyo Xoghaynta oo dhinac ka soo jeedsanaya.
t) Mudanayaasha Golaha oo ka soo horjeedsanaya shirguddoonka,
j) Xubno sharafta, Saxaafadda iyo dadweynaha la martigeliyey oo meel gaar ah leh.
2. Ajendaha shirka oo qoran, waxaa qaybinaya Xoghayaha Fulinta, waxaana ka doodaya , ansixinayana golaha.
3. Marka la hubiyo dhammaystirka habsami u socodka iyo tirakoobka mudanayaasha shirka, shir guddoonka ayaa ku dhawaaqaya furitaanka shiraka.
4. Mudanayaasha Golaha ee shirka jooga waxaa waajib ku ah ilaalinta habsami u socodka iyo hoggaaminta shir Guddoonka.
5. Qodobada Ajendaha waxaa looga doodayaa qodob-qodob keli-keli ah.
6. Qodobada Ajendaha waxaa looga doodayaa sida ay u kala horreeyaan.
7. Xubnuhu waa inay si xaqsoor leh u dhegaystaan xubin kasta oo ka hadalka Ajendaha uu shir-Guddoonku siiyo.
8. Qodobka Ajendaha ah ee aan taageero helin (Secondment) cod lama gelin karo, haddiise soo jeedimaha cusubi taageero waayaan lagama doodi karo.
9. Shir guddoonku wuxuu xaqiijinayaa hubinayaana in xubin kasta oo shirka joogtaa ay fursad u hesho ka hadalka Ajendaha haddii uu codsado oo Gacanta taago.
10. Xubin kasta oo ka mid ah mudanayaasha shirka fadhiya way ka
Reeban tahay inuu qodob ka hadlo mar wax ka badan, haddii aanay ku saabsanayn amar sixitaan.
11. Xurmada Shirku waa dood, is-dhageysi iyo Asluub wanaag.
12. Xoghayaha Fulintu waa: -
b) Xoghayaha Fulinta isaga ka mas’uul ah dhammaan shirarka Golaha iyo Guddiyaasha iyo ururinta ajendaha iyo diiwaan galinta hadal qoraalada.
t) In kastoo aanu cod ku lahayn wuxuu ku leeyahay tallo soo jeedin buuxda dhinaca shuruucda, Xeerarka iyo maamulka.
k) Sida Xubnaha Golaha oo kale wuxuu xaq u leeyahay in lagu muujiyo hadalqoraalka talada uu soo jeediyo marka ra’yigiisa lagaga bato.
x) Haddii Xoghayaha Fulintu laba shir ama ka badan ku kulmaan siiba guddi hoosaadyada cid ayuu u idman karaa shirarka qaarkood.
AWOODDA DEJINTA XEER HOOSAADKA.
1. Goluhu wuxuu dejinayaa isla markaasna ansixinayaa Xeer Hoosaadyo ku salaysan arrimaha hoos ku qoran: -
b. Xilka, waajibaadka iyo awoodaha ee Golaha Degmada ee Xeerkan ku xusan.
t. Hawl kasta oo sharci ama xeer kale jideeyey.
j. Arrimo kale oo xukuumadda dhexe waajibisay kuna soo saartay faafin rasmi ah.
2. Baahi badan looma qabo wixii Xeerkan ku cad in Xeer hoosaad lagu soo saaro. Wixii Xeerkan ama Xeerar kale oo qaran ka hor imanaya oo Xeer Hoosaad ahi way burayaan.
3. Xeer Hoosaad kasta oo hore loo dejiyey, wax waa lagu kordhin karaa, waxna waa laga dhimi karaa, waana la badeli karaa.
4. Haddii duruufi keento Degsiimo ama qayb ka mid ah Degmada, Xeer Hoosaad gaar ah waa loo samayn karaa.
GUDBINTA XEER HOOSAADKA .
1. Duqa Degmada iyo Xoghayaha Fulinta waxaa ku waajib ah in nuqul rasmi ah ee Xeerhoosaadka ka soo baxa Golaha loo gudbiyo Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha.
2. Wasiirka Arrimaha Guduhu wuxuu awood u leeyahay inuu xeerhoosaadkii ka hor imanaya Distuurka iyo xeerarka qaranka ku soo celiyo golihii uu kasoo baxay muddo (20) cisho gudahood ah, isagoo raacinaya qoraal muujinaya meelaha uu ka khilaafsanyahay sharciga iyo talo bixinba, si goluhu uu mar labaad u ansixiyo, ka dibna nuqul ka mid ah dib loogu soo celiyo wasiirka.
HABKA DEJINTA XEER HOOSAADYADA.
1. Ka hor inta aan la dejin Xeer Hoosaad kasta, waxaa Golaha Degmada ku waajib ah inuu si buuxda oo hufan uga baaraandeggo si qoto dheerna looga fekaro saamayntiisa, dhaxalgalkiisa, noqdona mid u cuntama Dadweynaha.
2. Xeer Hoosaad kasta oo la dejiyo, waa in dadweynaha loo bandhigaa, iyada oo laga faafinayo wargeysyada, Idaacadaha, Telifishanka, laguna dhejiyo meelaha caamka ah ee Dadweynuhu ku kulmo.
DAABACAADA IYO KAYDINTA XEER HOOSAADYADA.
1. Golaha Deegaanka waxa ku waajib ah inay daabacaan Xeer Hoosaadyada kuna soo saaraan faafin rasmi ah.
2. Waxa kale oo ku waajib ah xafidaadda iyo kaydinta Xeer Hoosaadyada, lana siiyo degmada iyo Hay’addaha Dawliga ah ee ay khuseeyso nuqullo.
ANSHAXA SHIRARKA IYO JEBINTA XEER HOOSAADYADA.
1. Mudane kasta ee Golaha Degmada waxa ka reeban fal kasta oo carqalad ku ah habsami u socodka shirarka Golayaasha sida: -
b. Hadal muran ka dhalan karo, Xiisad Abuur iyo qalalaanso gelin kara.
x. Gacan ka hadal.
2. Shir guddoonku wuxuu xaq u leehayahay mudanaha ku kaca Arrimaha ku xusan lambarka (1) aad ee qodobkan (Xarafkiis A, B, C, D, iyo E) inuu digniin qoraal ah siiyo.
3. Shirguddoonku wuxuu awood u leeyahay ka joojin hadal ama shir ka saaris marka uu digniin siiyo seddex jeer.
4. Shirguddoonku wuxuu awood u leeyahay in uu diyaariyo anshaxmarin la horgeeyo Guddiga joogtada ah ee Golaha, oo awood u leh Ganaax anshaxmarineed iyo ka joojin shirarka muddo cayiman.
5. shir Guddoonku markuu dareemo burbur shirka ku yimaada wuxuu xaq u leeyahay in shirka si degdeg ah u xidho ammaankana sugo.
6. Mudanaha ku kaca Gacan ka hadal, ee ku xusan xarafka (d) ee qodobkan lambarkiisa 1aad, wuxuu ku mutaysanayaa anshax Marin culus, sharaf ka xayuubin ama ciqaab Marin waxaana la horgeynayaa Guddiga joogtada ah ee Golaha Deegaanka Degmada iyadoo sharci loo marayo.
AWOODDA WASAARADDA ARRIMAHA GUDAHA EE DEJINTA XEER HOOSAAD.
1. Golaha Deegaanku hadduu ku guuldarraysto Dejin Xeer Hoosaad, Wasaaradda Arrimaha Guduhu waxay ku leedahay inay siiso talo soo jeedin iyo tilmaan la xidhiidha baahi dejin Xeer Hoosaad.
2. Hadday mar labaad ku guuldarraystaan, tilmaantii iyo tallo soo jeedintii Wasaaradda Arrimaha Gudaha ka dib muddo (45) cisho gudahood, jawaab lagu qancona laga waayo, Wasaaradda Arrimaha Gudaha, waxa u furan inay Xeer Hoosaad ku saabsan arrintii ay tilmaanta ka bixisay, u dejiso.
3. Wasaaradda Arrimaha Guduhu Xeer Hoosaadka ay soo saarto dhaqan-galkiisa wuxuu la mid yahay kuwa Golaha Degmadu soo saaray, fulinta iyo ku dhaqankiisuna waa waajib, marka uu sharci waafaqsan yahay. ( Qodobka 111aad faqradiisa 10aad ee Dastuurka JSL.
4. Shaqalaha Dawladaha Hoose iyo Wakaaladaha Biyuhu waxay yeelanayaan Xeer- nidaamiye u gaara ah, waxaana dejinaya Wasaarada Arrimaha Guddaha.
1. Guddoomiyaha Golaha iyo Ku-Xigeenkiisa waxay leeyihiin mushahar iyo Guno xil oo Goluhu u xadido, una ansixiyo.
2. Guddida joogtada ah oo aanay ku jirin xubnaha guddida fullintu waxay yeelanayaa gunno bileed iyo gunno kalfadhi oo goluhu u xadido una ansixiyo.
3. Xubnaha kale ee Goluhu waxay yeelanayaan Gunno kalfadhi oo Goluhu u xadido, una ansixiyo.
4. Gudi hoosaayduna waxay yeelanyaan Gunno kalfadhi oo Goluhu u xadido una ansixiyo.
5. Mudanayaashu markay u baxayaan Safar shaqo rasmi ah oo Degmada ka baxsan waxay leeyihiin gunno safar oo Goluhu Oggolaado.
6. Goluhu wuxuu gunnooyinka kalfadhiyadaas ku soo sarayaa Xeer Hoosaad, Nuqulana loo kala gubiyo Gudoomiyaha Gobolka, wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Hanti dhawraha Guud si ay ula socdaan.
7. Shardi waxa Golaha ku ah in xadaynta Gunnooyinka Kalfadhiyadu ku salysnaato awoodooda dhaqaale ee Degmada.
AWOODDA SHARCI DEJINTA.
Awoodaha Xeer dejinta ee ku xusan Xeerkan wuxuu Golaha awood buuxda u siinayaa inuu ku maareeyo ama ku maamulo dhammaan hawlaha xilkiisa ku tilmaaman ee Xeerkan oo ku siman xaka Degmada.
DOORASHOOYINKA DUQA IYO KU-XIGEENKIISA
DHAARTA MUDANAYAASHA GOLAHA
1. laga bilaabo maalinta ku dhawaaqida maxkamdda gobolka natiijada kama danbaysta ah ee doorashada mudanayaasha cusub, wasiirka wasaaradda Arrimaha Guduhu wuxuu ku dhawaaqayaa maalinta fadhiyada golayaasha deegaanada ee demooyinka dalka ay qabsoomayso, isagoo ka baahinaya warbaahinta, (15) cisho gudohood.
2. Haddii wasiirku ku dhawaaqi waayo, gole waliba isaga ayaa iskii u kulmaya (10) cisho gudahood oo ka danbaysa (15) cisho ee hore.
3. Kulankaa ugu horeeyay, waxaa gudoominaya isla markaasna dhaarinaya Gudoomiyaha maxkamadda Gobolka ama garsoore uu u igmaday oo ka tirsan kuwa gobolka iyo kuwa degmooyinka gobolkaas ka tirsan.
4. Fadhigaas lagu dhaarinayey mudanayaasha waxaa gudoonka shirka lagu wareejinayaa mudanaha ugu da’da weyn, waxaana lagu dooranayaa Duqa iyo ku xigeenkiisa, iyadoo ay goobjoog ka yihiin garsoorayaashii dhaariyey
HABKA DOORASHADA DUQA IYO KU-XIGEENKIISA.
1. Duqa Degmada iyo Ku-Xigeenkiisa Doorashadoodu waa kali kali, lamaane maaha.
2. Marka la magaacabo ama uu isu sharaxo hal musharax in loo doorto Duqa ama ku Xigeenkiisa, wuxuu shir gudoonka fadhigu ku dhawaaqayaa codayntii ka dibna wuxuu natiijadii codbinta.
3. Marka laba musharax ama ka badan la soo jeediyo ama ay isu taagaan in loo doorto Duqa ama ku-Xigeenkiisa, habka Doorashadu waxay noqonaysaa Gacan taag, oo ku ansaxaysa cod hal (1) dheeri ah.
MUDDADA DUQA IYO KU-XIGEENKIISA
1. Duqa iyo Ku-Xigeenkiisa muddada loo doortay Xilka way haynayaan, hadii aanay iska casilin ama aan laga qaadi ama aanay ku sifoobin tilmaamaha ku xusan Q.26aad ee xeerkan.
2. Duqa iyo Ku-Xigeenkiisa Degmooyinka way is casili karaan, istiqaadooda oo sababaysan waxay u soo gudbinayaan Golaha Deegaanka oo leh awooda aqbalaada ama diidmada
3. Haddii istiqaaladda laga aqbalo, Doorashada Duqa iyo Ku-xigeenkiisa cusub ama midkoodba isla fadhigaas ayaa lagu dooranayaa, iyadoo la raacayo nidaamkii hore loogu soo doortay Ee ku xusan Qodobka 63aad Ee Xeerkan.
GUDBINTA WAXQABADKA DUQA IYO KU-XIGEENKIISA.
1. Gudiga fulinta marka Sannad u dhammaadaba, waxaa waajib ku ah inay warbixin buuxda oo waxqabad, Qoraal ahaan muddo (30) cisho Gudahood ah Golaha ugu soo gudibiyaan.
2. Xubnaha Goluhu waxay xaq u leeyihiin inay su’aalo ka weydiiyaan warbixinta.
XIL KA QAADISTA DUQA IYO KU-XIGEENKIISA .
1. Duqa Degmada iyo ku-Xigeenkiisa waxaa xilka lagaga qaadi karaa marka ay ku sifoobaan oo ay ku cadaadaan sababaha soo socda ee hoos ku qoran.
b. Ka leexdo gudashada waajibaadka golaha Degmada iyo istraatiijiyadda guud ee Qaranka.
t. Jabiyo ama uu baal maro, Xeer Hoosaadyada Golaha iyo Xeerkan .
j. Ku sifoobo Awood maroorsi iyo kaligii talisnimo.
x. Caadaysto ku tumashada shuruucda, iyo Xeerarka Qaranka .
kh. Kukaco Kooxaysi, qabyaalad, kicin xamaasad oo horseedi kara Nabadgelyo darro.
d. Ku cadaato laguna helo musuqmaasaq iyo lunsi hanti qaran.
r. Haddii uu qaban waayo duqu kalfadhiyada ama shirarka Golaha uu waajibiyay xeerkan.
2. Xil ka qaadista Duqa ama ku-Xigeenkiisa ama labadooda oo wada jir ah waxaa soo jeedin kara Saddex meelood meel (1/3) xubnaha Golaha Deegaanka, iyaga oo qoraal sababaysan u soo gudbinaaya Duqa oo ku qaban doona shir aan caadi ahayn muddo (3) cisho gudahood ah oo ka bilaabanta maallinta uu soo gaadhay qoraalkum waxaana nuqulo la siinayaa Gudoomiyaha Gobolka iyo Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha.
3. Haddii uu Duqu uu ku fulin waayo qabashada shirkaas aan caadiga ahayn muddada ku xusan faqradda 2aad ee qodobkan, waxaa xilkii qabashada shirkaas fulinaya Gudoomiyaha Gobolka oo muddo 5 cisho gudahood ah ku qaban doona shirka taas oo ka bilaabmaysa dhamaadka 3dii cisho ee hore.
4. Duqa ka baaqsaday fulinta qabshadii shirkana wuxuu mutaysanayaa ciqaab gaadhi karta waayitaanka xubinimada sida ku xusan Q. 26aad ee xeerkan.
5. Xil ka qaadista Duqa iyo Ku-Xigeenkiisa waxay ku ansaxaysaa sadex meelood laba meelood (2/3) tirada xubnaha Golaha
6. Marka Duqa iyo Ku-Xigeenkiisa laga qaadayo xilka iyadoo la raacaayo qodobkan faqradihiisa (1aad iyo 2aad), waxaa shirkaa gudoominaya xubinta ugu da’da wayn, mudanayaasha jooga shirkaa gaarka ah waxay sii wadanayaan, una sii gudbayaan Doorashada Duqa iyo ku-Xigeenkiisa, ee buuxinaya jagooyinka bannaanaaday, iyada oo la raacayo Qodobka 64aad ee Xeerkan waxaana Shirkaa Gudoominaya xubinta ugu da’da wayn Golaha
7. Marka Ay Xilka Ka Qaadistu khusayso duqa oo kali ah, waxaa shirkaa gudoominaya kuxigeenka duqa. kadibna waxaa loo gudbayaa doorashada duqa iyada oo la raacayo qodobka 64aad.
8. Soo jeedinta Codsiga Xil ka qaadista Duqa iyo ku xigeenkiisa waxa shardi ah inay sababaysantahay aynna waafaqsantahay shurrudaha ku xusan qodobkan, faqradiisa 1aad, ee Xeerkan.
9. Haddii la isku qabto Sifaha Sharci ee xil ka qaadista Duqa iyo ku xigeenkiisa waxaa xallinta murankaasi u xilsaaran Go’aana ka gaadhi kara iyagoo u eegaya Sifaha Sharci ee Xeerkan, Guddiga Joogtadda ee Golaha Deegaankaasi khilaafku ka dhacay marka hore, haddii ay ku guul-daraysataan ama ay ku dhammaan waydo arrintu, waxa loo gudbinayaa Guddoomiyaha Gobolka & Wasiirka Arrimaha Guddaha.
QAAB DHISMEEDKA MAAMULKA DAWLADAHA HOOSE EE DEGMOOYINKA IYO XILALKOODA.
MAAMULKA DAWLADDA HOOSE EE DEGMADA.
1. Dawladdaha Hoose Ee Darajadoodu tahay “A” waxay yeelanayaan “4” Afar waaxood oo kala ah: -
b) Waaxda Maamulka & Maaliyadda.
t) Waaxda Hawlaha Guud iyo dhulka.28
j) Waaxda Cashuuraha.
Kh) Waaxda Arrimaha Bulshada.
2) Waax kasta oo ku xusan qodobka 1aad waxay u sii kala baxaysaa qaybo “Head Units” iyo laamo hoos yimaadda qayb kasta ee Waaxyahu ka kooban yihiin.
3) Qaybaha waax kastaa ka kooban tahay iyo laamaha ka farcama qaybaha waxay ku cad yihiin qaab dhismeedka D/Hoose ee Degmada “Structure” ee ay soo wada diyaariyeen Wasaaradda Arrimaha Gudaha JSL iyo Hay’adda Shaqaalaha Dawladda.
4) Waaxyaha Dawladda Hoose ee Degmada waa la kordhinkaraa, waana la yarayn karaa, waana la isku dari karaa hadba baahidoodu siday tahay.
5) Degmooyinka Darajada B & C, waxay yeelanayaan labada waaxood ee kala ah: -
b. Waaxda Maamulka iyo Cashuuraadka.
t. Waaxda Dhulka iyo Adeegyada Bulshada.
6) Degmooyinka Darajada “D” waxay yeelanayaan laba qaybood “Head Of Service” oo kala ah: -
b. Qaybta Maamulka iyo Cashuuraadka.
t. Qaybta Dhulka iyo Adeegyada Arrimaha Bulshada.
7) Abuuridda, Balaadhinta iyo kordhinta waaxyaha Degmooyinka Darajooyinka B, C, & D waxay ku salaysnaan doontaa qiimayn Wasaaradda Arrimaha Guduhu ku samayso Kobaca Dhaqaalaha iyo korodhka Dakhliga hadba Heerka Degmo kastaa ka gaadho.
Waaxyaha Degmooyinka Darajada “A”
B . XILKA WAAXDA MAAMULKA & MAALIYADDA
1. Hubinta, Diyaarinta, kaydinta iyo ku shaqaynta Miisaaniyadda dawladda Hoose ee Degmada.
2. Diyaarinta, Xafidaadda, iyo kaydinta dhokumentiga Xisaabxidhyada la xidhiidha maamulka Xisaabaadka iyo Miisaaniyadda.
3. Maamulka iyo ilaalinta hantida iyo Qalabka Bakhaaradda iyo Xafiisyada.
4. Kaydinta iyo la socodka dhokumentiga la xidhiidha qandaraasyada ay dhinac ka tahay Dawladda Hoose ee Degmada.
5. Diiwaangelinta hantida guurtada iyo tan ma guurtada ah ee Dawladda Hoose ee Degmada.
6. Dalabka Daabacaada, kaydinta iyo qaybinta Buugaagta lacag qabashada iyo Cashuuraadka, Shidaalka iyo Bakhaarada.
7. Is-barbar dhigga qorshaha Dakhliga iyo kharashka bil walba.
8. Diyaarinta Xisaab-xidhyada, bileed, Saddex bilood, Lix Bilood iyo Sannadkii.
9. Soo iibinta Alaabta, diiwaangelintooda iyo kaydintood.
10. Hubinta soo xeraynta Dakhli maalmeedka, bileedka iyo kan Sannadka.
11. Hubinta soo xeraynta Buugaagta iyo tigidhada la isticmaalay iyo kaydintooda.
T. XILKA WAAXDA CASHUURAHA.
1. Ururinta Cashuuraha Dawladda Hoose ee Degmada.
2. Abuuris ilo dhaqaale oo cusub iyo u sahamintooda.
3. Dabagalka iyo soo xaraynta Cashuurihii baaqday sannooyinkii hore.
4. Kormeerka suuqyada iyo hawl qabadka shaqaalaha ururiya Cashuuraadka.
5. Qiimaynta Shaqaalaha Cashuuraha iyo ku tababaridaa goob shaqo (on the job training).
6. Tira-koobidda iyo diiwaangelinta hantida ma guurtada ah ee dadewynaha Degmada ku nooli leeyihiin, sida Daaraha, Carshaanta, Sandaqadaha, Beeraha, Gawaadhida I.W.M. ee Cashuuruhu ku waajibtay.
7. Ka talo bixinta Arrimaha shaqada iyo shaqaalaha Waaxda.
8. Qiimaynta noocyada Cashuuraha ee Sannad kasta.
9. Ururinta kirada iyo Arrimaha ijaarka Hantida Dawladda Hoose.
10. Tirakoobka iyo Diiwaangelinta ilaha Dakhliga.
11. Soo xeraynta Dakhli maalmeedka
12. Talo soo jeedinta abuuridda iyo dib u habaynta Cashuuraha.
13. Kala xadaynta iyo kala habeynta Darajooyinka Liisamadooda.
J. XILKA WAAXDA HAWLAHA GUUD &DHULKA
1. Hirgelinta mashaariicda iyo dhismayaasha.
2. Dayactirka Dhismayaasha D/Hoose ee Degmada.
3. Hawlgelinta iyo dayactirka Gaadiidka, Guryaha, Xafiisyada, iyo qalabka Dawladda Hoose.
4. Soo gudbinta baahidda Gaadiid Cusub. Dayactirka iyo xanaanaynta jidadka, Beeraha Nasashada, garoomada iyo fagaarayaasha Caanka ah.
5. Soo diyaarinta qorshe maalmeedka, shidaalka, Saliidaha iyo xaydhaha Gaadiidka, matoorada iyo qalabka culusi u baahan yihiin.
6. Maamulka Hoosooyinka, Geerashyada iyo qalabayntooda
7. Ku dhaqanka qorshaha iyo jaangoynta Dhulka.
8. Ku dhaqanka shuruucda iyo Xeerarka Dhulka.
9. Diiwaangelinta oggolaanshaha lahaanshaha Dhulka, mulkiyadaha, dhismayaasha ma guurtada ah ee dadweynaha, arrimaha Dhul bixinta iyo kormeerka Dhulka.
10 Ilaalinta daryeelka, qorsheynta iyo jaangoynta dhulka danta guud.
11. Jaangoynta iyo Gacan ku haynta dayactirka dhismayaasha Golaha Degmada, Xannaanaynta jidadka, goobaha nasashada, garoomada, Dugsiyada, rugaha Caafimaadka, Rugaha kawaanada (iyo Istaamada Gaadiidka) I.W.M.
12. Kala saaridda iyo xallinta khilaafaadka ka yimaadda farsamada Dhulka.
13. Qorshaynta iyo isku dheelitirka Basaska, Tagaasidda, Iskarogooyinka iyo Gaadiidka xammuulka dadweynaha saldhigyadooda, Gaadhi Dameerada iyo Dadka maritaankooda iyo Calaamadaha la xidhiidha.
14. Samaynta iyo diyaarinta calaamadaha la xidhiidha Nabadgelyadda wadooyinka iyo muujintooda.
15. Habaynta iyo dejinta Calaamadaa Ganacsiga iyo xayaysiinta (Commercial Sign Boards).
16. Samaynta, diyaarinta iyo rakibaadda tiirarka laydhka waddooyinka, Aarkooyinka, xarumaha nasashada, goobaha Dabaaldegyada iyo munaasibadaha.
17. Hubinta, Farsamadda, badbaadada qalabka korontoda, Telfoonada, shidaalka iyo ka hortagga khatarta dabka.
18. Habaynta iyo kala duwida bulaacadaha, biyo mareenada, dhuumaha Biyaha, saaqiyadaha iyo adeegyada mara dhulka hoostiisa iyo oogadiisaba.
19. Keydinta Mulkiyadaha iyo Dhokomantiga la xiriira Dhul bixinta iyo Diiwaangalintooda.
20. Hubinta, iswaafajinta Naqshada iyo Qaabka Dhul bixinta.
21. Sameynta iyo Hubinta Jidadka, Wadooyinka, Sakadaha, iyo Lambarintooda.
22. Tirakoobka, Diiwaangalinta iyo lambarinta dhismayaasha Dadweynaha iyo Dawladda.
23. Astaynta iyo Tilmaamidda Goobaha Danta Guud.
24. Dib u habeynta Naqshadaha Dhismaha iyo jaangoynta Cabirka Dhulka ayadoo loo kala saaraayo raqamadda kala ah A,B,C iyo D si Qof waliba itaalkiisa u dhisto.
25. Dejinta iyo Sameynta Qorshaha hor’umarinta Degmada.
26. Dab Demiska, Qurxinta iyo Bilicsamida Magaalada.
X . XILKA WAAXDA ARRIMAHA BULSHADA.
1. Ilaalinta Nadaafadda, Fayo dhawrka, bilicsanaanta iyo quruxda Degmada
2. Horumarinta Deegaanka iyo khayraadka dabiiciga ah ee Degmada.
3. Horumarinta fanka, isboortiga, suugaanta, Hiddaha iyo Dhaqanka
4. Noolaynta shacaa’iirta islaamiga ah, waddaniga iyo Caalamiga ah.
5. Daryeelka faya-dhawrka Guud iyo ka hortagga cuduradda faafa.
6. Daad-guraynta iyo u gargaarka dadweynaha haddii aafo dhacdo iyo u gargaarkooda.
7. Dhisidda iyo dayactirka Dugsiyada aasaasiga ah, kuwa quraanka iyo daryeelka Masaajidyada.
8. Daryeelka iyo dhismaha xarumaha Xanaanada Hooyada iyo Dhalaanka iyo Dugsiyada dhaqaalaha guriga (Hoyga).
9. Habaynta, Qorshaynta, Hubinta iyo isku dheeli tirka baahida Goobaha Biyaha “Kiosks” iyo waxqabadkooda.
10. Maamulidda iyo kormeerka la xidhiidha horumarinta miyiga.
11. Habaynta hawlaha aasidda iyo Qabuuraha.
12 Qorshaha kaltanka Rugaha Caafimaadka iyo Farmasiyayaasha iyo heegan galintooda.
13. La socodka isticmaalka dhaqan-galka daawooyinka iyo Cuntada Qasaacadaysan iyo la socodka mudada isticmaalka.
14. Casriyeynta Suuqyada dalagyada wadaniga ah iyo dhiirigalinta cunidooda
15. Ilaalinta anshaxa, wacyi galinta iyo taakulaynta dadka tabaalaysan.
16. Sicir Goynta qiimaha Badeecadaha iyo ilaalinta maceeshada quutal daruuriga.
17. Ilaalinta Anshaxa, wakhtiga goobaha lagu daawado fiidiyoyaasha, Silimada iyo Xafladaha Aroosyada.
18. Diiwaan-gelinta & tiro-koobka Dadweynaha iyada oo la raacayo igmasho laga helo & xeer-nidaamiye ay diyaariso wasaaradda Arrimaha Gudduhu, si la isku waafajiyo qoddobka ka hadlaya arrintaasi iyo Xilka Wasaaradda ee ku cad Xeerka Jinsiyada.
MAGACAABISTA AGAASIMEYAASHA WAAXYAHA & MADAXDA QAYBAHA.
1. Agaasimeyaasha waaxyuhu waxay ka mid yihiin shaqaalaha Dawladda Hoose ee Degmada.
2. Agaasimayaasha Waaxyaha qoritaankooda, magacaabistooda, dallacaadooda, casilaadooda iyo erigooda waxaa iska leh Guddiga Fulinta ee Degmada, waxaana qeexaya Xeerka shaqaalaha Dawladaha Hoose.
3. Agaasimayaasha, madaxda qaybaha, madaxda laamaha iyo shaqaale weynaha, mushaharkooda iyo jagadii Gunno Xil mudan waxa soo jeedinaya Gudida fulinta waxaana ansixinaya Golaha Deegaanka Degmada.
4. Madaxda qaybaha iyo madaxda laamaha waxaa magacaabaya Xoghayaha Fulinta ka dib markuu la tashado Agaasimayaasha Waaxyahayaha
1. Dhulka danta Guud ee Degsiimo kasta, waxaa ku waajib ah Dawladda Hoose ee Degmadda, iany mashaariicda horumarineed ee adeegyada Arrimaha Bulshada si isu dheeli tiran oo ku salaysan baahidda looga fuliyo.
2. Dhismaha Mashaariicda adeegyada Arrimaha Bulshada ee ay maalgalinayaan hay’adaha Caalamiga ee Q31aramada Midoobay iyo Hay’adaha kale ee Caalamiga ah waa in ay waafaqsan yihiin Goobaha laga dhisayaa jaangoynta D/Hoose.
3. Dawladda Hoose ee Degmadu waxay awood u leedahay inay joojiso ama diido mashruuc kasta oo aan marka hore lagala tashan oo aan oggolaansho haysan isticmaalka dhulka ama dhismaha aan waafaqsanayn jaangoynta Dawldda Hoose.
4. Dhismaha mashaariicda adeegyada bulshada waxaa laga dhisi karaa Degsiimooyinka iyo Goobta ay isla waafaqaan Golaha Degmadda iyo Hay’adaha ay khusayso.
5. Golaha Deegaanku mashaariicda horumarineed ee Degmada waxay uga baahan yihiin Hay’ada caalamiga ah waxay u soo gudbinayaan Wasaaradda Arrimaha Gudaha oo u sii gudbin doonta Wasaaradda Qorshaynta Qaranka.
ARRIMAHA FARSAMADA IYO ADEEGYADA BULSHADA
Hay’adaha Dawliga ah ee adeegga Bulshada, shirkadaha gaarka loo leeyahay iyo hay’adaha iyo shirkadaha caalamiga ah waxaa shardi ah inay heshiis qoraal ah kala galaan Degmada arrimaha farsamada ee Qodobkan 1,2,3,4,5,6,7,8, ee hoos ku qeexan: -
1. CURIN DHISMO AMA HAWL SHAQO.
Lama bilaabi karo hawlgal shaqo curin dhisme cusub, dib-u- habayn mid duuga haddii aan Dawladda Hoose laga haysan oggolaanshaha ku dhaqanka dhulka iyo dhisme curin “Building Permit”
2. SOO GUDBINTA NAQSHADAHA “MAP OF THE AREA”.
b) Ruqsadda ogoolaanshaha xukuumadda ka sakow wakaaladaha Nalka iyo shirkadaaha Telefoonada, waxaa ku waajib ah markasta inay Naqshadahooda qorshaha fidinta iyo ballaadhinta farsamadda Nalka iyo Telefoonada u soo gudbiyaan Dawladda Hoose ee Degmada si loo waafajiyo ama loogu talo galo jaangoynta Degmada, loona siiyo oggolaanshaha ku dhaqanka.
t) Naqshadda laga rabo shirkadaha Nalka iyo Telefoonada waa inay ku cad yihiin arrimahan.
1. Aagga iyo xaafadda ay hawlgalka u rabaan.
2. Tirada iyo magacyada jidadka iyo toobiyaha xaafad kasta u qoondaysan inay gaadhsiiyaan Nalka ama tilifoonada.
3. Tiirarka Nalka/Tilifoonada dhumucdooda balaadhka iyo dhererkoodaba.
4. Qalabka ay ka samaysan yihiin, (Shub, Bir, Loox, I.W.M)
5. Cabirka ay isku jirayaan tiirarku ( mitir)
6. Cabirka (Mitir) tiirarku ay aasan yihiin iyo inta ay dhulka ka sareeyaan.
7. Waayiradda Nalka iyo xadhkaha tilifoonada in ay yihiin kuwa dhulka hoostiisa ku aasan ama hawada sare maraya (Under Ground or over head line Cables).
8. Goobaha la dhigayo haddii ay jiraan (Transmeters or transformer and main cable distribution Stations)
9. Nooca waayirada iyo xadhkaha dhumucdooda iyo inay duuban yihiin ama qaawan yihiin.
10. Cabirka dhulka ee qalabka la dhigaayo (Transformers)
11.Cabirka tiirarka Nalka ama tilifoonadu u jiraan daaraha, dhismayaasha hortooda iyo intay jidadka u jiraan.
12 Shirkadaha Tilifoonada iyo kuwa Laydhka in mid kasta tiirarkeedu u gaar yihiiin wax wadaag la yidhaahdaana aanu ka dhaxayn
3. WAKAALADA BIYAHA DEGMADA
b) Golaha Degmadda, waxay xaq u leeyihiin kormeer iyo warbixin, la tashi madaxda Wakaaladda Biyaha iyagoo mar walba ka duulaya daryeelka Arrimaha Bulshada ee dhinaca Biyaha, Waxayna hoos imanaysaa Wakaalada Biyuhu maamulka Dawladda Hoose
t) Golaha Degmada waxay warbixinta u soo gudbinayaa Wasaaradda Arrimaha Gudaha
j) Wakaalada biyaha Degmada waxa laga rabaa inay joogtaynta biyo gelinta oo naqshadaysan u gudbiyaan maamulka Degmadda si loo waafajiyo fidinta iyo Naqshada Degmadda waxaana laga rabaa macluumaadkan: -
1. Xaafadda biyo galinta lala rabo
2. Jidadka iyo toobiyaha biyo galinta,
3. Cabirka iyo muga dhismaha biyo kaydiyaha (Water Reservior)
4. Dhuumaha iyo qasabadaha Kiyooska “Main Pipes” dhumucdooda
5. Qasabadaha biyo qaybinta dhumucdooda “Distrbution pipe line”
6. Cabirka dhismaha gododka biyo qaybinta “Main Valves”
7. abirka dhulka hoostiisa ee qasabaduhu ku duugan yihiin ama ku aasan yihiin.
8. Nooca saacadaha biyo tiriska
9. Goobaha waraabka dadweynaha “Kiosks” tiradooda
x) Maareeyaha iyo Maareeye ku-Xigeenk Biyaha waxaa magacaabaya Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha markuu la tashado Madaxweynaha, marka laga reebo Mareeyaha iyo Ku Xigeenka Caasimada Hargeysa oo uu si toos ah Madaxweynuhu u magacaabayo.
4. SHIRKADAHA LAYDHKA.& ISGAADHSIINTA GAARKA LOO LEEYAHAY .
b) Shirkadaha laydhka iyo isgaadhsiinta gaarka loo leeyahay way ka reeban yihiin in la siiyo ruqsadda oggolaanshaha ku dhaqanka dhulka haddii aanay la iman ruqsadda hay’adaha xukuumada ee hawshoodu khusayso
t) Kuma jiraan matoorada yaryar ee sida gaarka ah loo leeyahay ee lagu isticmaalo guri ama xafiis I.W.M. (Personal use )
5. GOOB SHAQO.
b) Hawlaha goob shaqo sida dib u dhis, dayac tir, dib-u- habayn ama hawlgal cusub oo la xidhiidha, Nalka, Tilifoonada, Biyo gelinta iyo wadooyinka ee kala ah godod qodis, dhul jeexid, ama furfurid qalab koronto, iyo tilifoon waxaa laga rabaa in ay marka hore ka soo qaataan Dawladda Hoose Ruqsadda oggolaanshaha goob shaqo.
t) Inay dhaqan galiso lana timaado hay’addu shuruudaha iyo astaamaha goob shaqo, kana mid yihiin.
1. Inay goob joog yihiin saraakiil ka kala tirsan Wasaaradda Hawlaha Guud, Wasaaradda Boosaha, Iyo Dawladda Hoose “Inspectors” aqoon u leh hawsha. Saraakiishaas waxa xil ka saaran yahay xogogaal u noqoshada qalabka hubinta iyo is waafajinta joogtaynta iyo naqshadaha ilaa dhammaadka hawsha
2. In goobta laga taago astaanta goob – shaqo ka socoto iyo eeriyada (iska jir ka digtoonow I.W.M.)
3. In goobta shaqo la xidho laguna wareejiyo dayr “Tiirar” (Udubyo) taagtaagan oo maryo cas laga lulo
4. Haddii hawshu gaadho xilli habeenimo ah in Nal iftiimaya lagu xidho, haddii ay bohol ama godod la jeexay jiraan waardiye dadka uga diga la dhigo goobta.
5. In degdeg loo awdo ama loo dhiso gododka iyo dhulka jeexan isla markay hawshu dhamaato oo laga faraxasho.
6. In wixii qalab ah iyo hadhaa qashin ah degdeg looga raro goobtaas lana nadiifiyo.
j) Haddii fulin la’aanta shuuradaha ku qoran faqradda (1)aad ee Qodobkan awgeed dad wax ku noqdaan goobtaas shaqo ha noqoto dhimasho ama dhaawacba ama khasaare Gaadiid midkood waxa loo raacayaa magdhawga oo ka mas’uul ah hay’adda, shirkadda iyo cidda ay khusayso hawsha goobtaasi .
x) Maamulka Degmada haddii uu ka fulinayo goob ama aagag ay ku aasan yihiin ama ka taagan yihiin qalab farsamo ee Biyaha, laydhka iyo Tilifoonada kama fulin karaan karto hawl ilaa ay kala xidhiidho Hay’adaha ay khusayso.
Kh) Haddii ay dhacdo inay la tashi la’aan iyo wargelin la’aan hawl ka fuliyaan Goobahaas wixii khasaare gaadha qalabkaas waxaa ka mas’uul ah Maamulka Hay’adda ama Shirkadda.
6. SHIRKADAHA HADDA JIRA.
b) Shirkadaha gaarka loo leeyahay ee ku shaqada leh Nalka iyo Tililfoonada waa inay naqsahadahooda hadda jira “Map of the Area” u soo gudbiyaan Dawladda Hoose ee Degmada soona raaciyaan tirakoob waafi ah ee la xidhiidha qalabkooda dhismayaashooda iyo Guryaha ay ku jiraan laydhka iyo Tilifoonada.
t) Sannad kasta dhammaadkiisa shirkadaha Tilifoonada iyo laydhka waxa laga rabaa soo gudbinta korodhka Tilifoonada iyo laydhka ku soo biiray.
7. KAALMAHA SHIDAALKA.
b) Kaalmaha shidaalka kuma haboona oo way ka reeban tahay: -
1. In laga dhiso Xaafadaha la deggan yahay dhexdooda iyo Guryaha lagu nool yahay dhinacyadooda.
2. In laga dhiso Faras magaalaha Ganacsiga iyo suuqyada cidhiidhiga ee cagtu ku badan tahay ee jidadka dhexmaraa yahay 30 mitir ama wax ka yar.
3. In laga dhiso kaalmaha Shidaalka hareeraha Jidadka laamiga ah iyo jidadka caadiga ah masaafad 10 mitir wax ka yar.
4. Kaalmaha shidaalka ee foostooyinka kaydka u yihiin waa khatar iyo halis badheedha, ku ganacsigooduna sharciyan waa xaaraan lamana oggola.
t) Rugaha ka ganacsiga shidaalka waxa waajib ku ah inay u dhan yihiin kuna rakiban yihiin qalabka lagu bakhtiiyo ama lagula dagaalamo dabka (Safety Engineering and Work Shop Precautions).
1. Barkad Biyo ah oo kayd ah.
2. Ciid ku jirta weel diyaar ah lana dhigo ceelasha agtooda.
3. Haamo gacmeedka dabdamiska (Fire extinguishers ba)
4. Majarafado iyo baaldiyo.
5. Calaamadaha sigaar laguma cabi karo iyo calaamadaha khatarta “Madax Aadamiga ee lafaha ah ee isku talaabta “Shanshooyin ku suntan tahay”
6. In baabuurka matoorkiisu densanaado marka badroolka lagu shubayo.
8. KA HORTEGGA KHATARTA DABKA.
b. Dabka ka dhasha kaalmaha shidaalka iyo xadhkaha laydhka sababo la xidhiidha taxadir la’aan ama cillad farsamo iyo dayactir la’aan waxaa loo raacayaa oo ka mas’uul ah bixinta magdhawga dhibaatada iyo khasaaraha ay u gaystaan dad iyo duunyo cidda ay khusayso ee leh kaalinta ama korontada.
t. Shilalka gaadiidka dadweynuhu sababaan magdhaw laguma leh Shirkadaha laydhka haddii qalabkoodu waafaqsan yihiin shuruudahan: -
1. Tiirarka laydhka oo shub ah, qori ama bir
2. Xadhkaha laydhka oo dhulka ka sareeya ugu yaraan (8) mitir, hoostana ugu yaraan 1 mitir qodan
3. Xadhkaha laydhka oo duuban.
9. WAX SOO SAARKA WAKAALADAHA.
1. Wakaaladaha iyo shirkadaha ku hawlahan laydhka, Biyaha, Tilfoonada iyo Warshadaha waxa laga rabaa Cashuurta Dawladda Hoose ee ku waajibtay: -
b) Wax soo saarkooda.
t) Cashuurta Dhulka ee Dhismayaasha iyo Qalabkooda Farsamo (Areial Transmision or Disc Units) Transformers tiirarka.
2. Dawladda Hoose iyo Hay’adaha ay khusayso ee ay ku waajibtay cashuurta ku cad xarafka 1aad ee Qodobkan, Qaabka iyo nidaamka Xisaabaadka ay ku kala qaadanayaan Cashuurta Dawladda Hoose, waxaa isla meel dhigaaya labada dhinac ee ay khusayso.
3. Shardise waxaa ah in lagu saleeyo raad raaca nidaamkan hoos ku qoran midkood:-
b) In loogu qaado biilasha ay ku soo dallacaan macaamiisha ee billaha ah.
t) Meter Reading system saacadaha istimaalka qoraan.
j) Dakhli bileedka Monthly income “Cash Buug Reference”
x) Bank Statement “Dhinaca Dakhlliga”.
Kh) Diiwaanada macaamiisha iyo iibka “General Ledger & Sales Journal”.
d) Diiwaanka Dakhli maalmeedka xarunta ee Hay’ad kasta.
r) Xisaab xidh billeedka ama sannadeedka.
GOOBAHA QALABKA LAYDHKA IYO TILFOONADA.
1. Dawladda Hoose xil baa ka saaran qalabka korontada iyo tilfoonada ilaalintooda, waxaana ka reeban bixinta Goobaha ay ka taagan yihiin ama ku aasan yihiin qalabka korontada iyo Tilifoonada
2. Waxa kale oo ka reeban bixinta dhulka Naqshada ugu jira ee D/Hoose ku dhaqankiisa hore u bixisay.
1. waxa waajib ku ah Golaha Deegaanka tirakoobka, dib u habaynta, Diiwn Gelinta iyo isu dheeli tirka Gaadiidka daweynaha “Basaska, Tagaasida” ee u kala goosha Degmada.
b) In la diiwaan geliyo lana siiyo Baabuur kasta l ambar ka diiwaan gashan Dawladda Hoose oo taxane ah, laguna qoro 2 dheeg.
t) In diilin renji ah lagu sunto Tagaasida Degmada gudaheeda ka hawlgala korkiisana laga taago calaamadda (Taxi ) iyo astaanta Degmada ee labada daaqadood dhinacyada hore
j) In rugaha gaadiidka dadweynaha iyo adeega guud la kala saaro, si saxmadda loo yareeyo.
x) In saldhigyada iyo barxadaha nasashada iyo marinada ay maraan la habeeyo, lagana taago astaamaha gaadiidka daweynaha.
Kh) In aagga go’doonka ah ee gaadiid la’aanta iyo gaadiid xumo ka taagan tahay gaadiid ka howl gala loo sameeyo.
GAWRACA IYO SARIIBADAHA.
1. Hubinta iyo suggida Caafimaadka Xoolaha daabaxa ah ka sokow waxaaa Dawladda Hoose saran u fiijignaanta ka hortagga cudurada faafa ee ka dhashay nadaafad-darrada siiba goobaha gawraca, sariibadaha hilibka, Kaluunka iyo khudradaarta oo loo baahan yahay joogtaynta nadaafadooda.
2. In shaqaalaha ku hawlan dareyeelka iyo nadaafadda Goobtaas la daryeelo loona fidiyo gunnayn gaar u ah iyo nafaqayn.
3. In biyo kayd ah oo ku filan ay khasab tahay helitaankoodu.
4. Hawl maalmeedka Nadaafada goobahaas oo ah sidatan: -
b) In biyo kulul lagu maydho goobta Gawraca, Sariibadaha Hilibka, khudaarta Kaluunka miisaska, iyo qalabka la isticmaalo.
t) In Caustic Acid iyo soodhe “Powder” ah lagu maydho maalin kasta xilliga laga rawaxo oo joogto ah.
x) in bulaacadaha iyo dhuumaha wasakh mareenka ah Canalization/Drainage ee xero dhiigta xilliyada qaarkood lagu shubo Sulphuric acid biyana la raacsiiyo ugu dambaynta.
5. Isticmaalka kiimikada lagu nadiifinayo kawaanada iyo sariibadaha waxa oggolaansho looga qaadanayaa Wasaaradda Caafimaadka
Kor u qaadidda iyo ilaalinta fayadhawrka waxaa asaas u ah jaangoynta kormeerka iyo wax ka qabadka.
b) Bulaacadaha, Musqulaha iyo Goobaha khashin qubka Buufintooda iyo Nadaafadooda
t) Goobaha Ganacsiga sid sariibadaha, HuteeladaCuntada, Mukhaayadaha, Albeerkooyinka Hurdada qalabkooda iyo weelka Cuntada hubintooda Xaaladooda Nadaafadeed iyo amar bixinta baddalkooda haddii ay lama huraan noqoto.
1. Mudnaanta kowaad ee maalgelineed waa in la siiyo helitaanka Baabuurta dab-demiska iyo qalabka fudud ee dabka lagula dagaalamo bakhtiintiisa.
2. Dawladda Hoose ee Degmada waxaa laga rabaa inay hanato maalgashiga iyo dedejinta dhismaha kooxda dab-demiska ee Degmada.
b) Xarunta iyo Hoosada Gaadiidka Dab-demiska iyo Hoosada
t) Dugsiga tababarka shaqaalaha ee kooxda dab damiska “Anti-Fire Gang/ Brigade”.
j)Berkadaha keydka biyaha dab-demiska dhismahooda.
x) Keenista qalabka fudud ee dab-deminta “Portable Fire Extinguishers”.
3. Inay waajib kaga dhigaan meheradaha, Guryaha, Huteelada kuwa Cuntada iyo Hurdadaba inay dhigtaan qalabka dab-demiska laguna kormeero fulintooda.
4. Inay dhismayaasha Cusub waajib kaga dhigaan ku tala-galka qalabkaas nooc kastuu yahay.
Dawladda Hoose ee Degmada waxa waajib ku ah, iyadoo adeegsanaysa Ciidanka Nabadgelyada Wadooyinka, inay qotomiso ama dejiso astaamaha waddooyinka (Traffic Signs) kuna dhammaystirto dhammaan jidadka Degmada oo dhan.
QURXINTA IYO DAYACTIRKA.
1. Dawladda Hoose waxa ku waajib ah in ay dhisto Dhulka ku yaalla laamiga baalihiisa ee u dhexeeya dhismayaasha iyo jidka laamiga ah “Pavement”.
2. Si kor loogu qaado bilicda iyo quruxda magaalada, waxaa ku waajib ah muwaadin kasta oo leh dhisme inuu dayactiro oo caddeeyo qurxinta dhismayaashiisa gaar ahaan faras magaalaha iyo suuqa ganacsiga Sannadiiba hal mar siiba maalmaha ciidaha.
3. Dawladda Hoose ee Degmada waxa ku waajib ah wacyi galinta iyo muddeynta dhismaha jidadka “Pavment” ee dadku maro iyo qurxinta dhismayaasha, Meel marin la’aanta faraqadda 1aad, 2aad ee qodobkan waxaa lagu mutaysanayaa ganaax.
4. Dawladda Hoose waxa ku waajib ah oo laga rabaa inay qodobada kor ku qoran ee xubintani ka kooban tahay lagu faafiyo wageysyada lagana sii daayo Idaacadda muddo bil ah ugu yaraan iyo mar kasta oo loo baahdo.
HEEGAN GALINTA FARMASIIYADA.
Habaynta kaltanka famasiiyada iyo heegan galinta Rugaha Caafimaadka, Dabdamiska, Korontoda, Biyaha iyo Kaalmaha Shiidaalka ee heer Degsiimo iyo Guud ahaanba Degmada, waxaa dajinaysa Dawladda Hoose
ILAALINTA SICIR GOYNTA.
Golaha Deegaanka waxa ka mid ah waajibaadka saaran sicir goynta iyo ilaalinta quutal daruuriga ha noqdo mid caydhiin,mid basil, Jimlad iyo miisba (6) lixdii biloodba, hal mar hadba dhaqdhaqaaqa korodhka iyo hoos u dhaca sarifka hadba heerka uu joogo.
KALA XADAYNTA MEHERADAHA GANACSIGA & KALA HABAYNTOODA.
Kala saarista hawlaha, waajibaadka iyo xuduudda ay kala leeyihiin ganacsatada kala ah:-
b) Soo dejiyaha badeecadaha iyo dhoofiyaha (“Importer and Exporter”Jumlad iibiye Whole Saler
t) Tafaariiq iibiye “Retailer”.
Golaha Deegaanka ee Degmada waxaa xil ka saaran yahay xaqiijinta kala habaynta iyo xadaynta xuduudaha darajooyinka Ganacsiga ee Xagga sare ku xusan kala leeyihiin iyagoo ku soo saaraaya Xeer hoosaadyo (By Laws) iyo go’aanno la xidhiidha toosinta Ganacsiga siiba dib u habaynta liisamadooda oo ku salaysan darajadooda ganacsi.
HAY’ADAHA MAXALIGA .
Hay’adaha maxaliga ah Qandaraaslayaasha ee ka soo qaata dhisme mashaariic horumarineed sida MCH, Dugsi, Saldhig Boolis, Sariibad, Hangar I.W.M, kama dhisi karaan xaafad ama goob aan Dawladda Hoose ugu jirin jaangoynta.
Shardi waxaa ah in marka hore lagala xidhiidho Dawladda Hoose ee Degmada, kaalinta baahida dhismahaas ka jirrto iyo goobta loo qoondeeyey.
CIQAABTA KU XADGUDUBKA XEERKAN.
1. Cid kasta oo jebisa Qodob ama Qodobo ka mid ah Xeerkan ama diida ama ishortaagta amarada ka soo baxa Golaha Deegaanka ama Saraakiisha u xilsaaran fulinta hawl kasta oo Guluhu leeyahay
Waxay mudan doonaan Ciqaabaha soo socda: -
Ganaax lacageed oo u dhaxeeya S.L.SHs. 50,000/= ilaa S.L.SHs. 5, 000,000/= Xadhig gaadhaya (3) bilood ilaa (6)Bilood ama labada oo la isugu daro.
2.Fal dambiyeedyada ka dhasha, kana baxsan kuwa ku xusan lambarka 1aad ee Qodobkan, waxa loo gudbinayaa Hay’adaha sharciga ku shaqada leh, waxaana loo cuskanayaa Xeerka Ciqaabta Qaranka.
MAAMULKA IYO XISAABAADKA GOLAHA
1. Dakhliga Goluhu wuxuu ka kooban yahay: -
j) Cashuur Maalmeed ka dhasha adeegyada ay qabtaan.
2. Dakhli ka yimaada hantida ma guurtada ah iyo ma guurtada ah ee Dadweynaha.
3. Dakhli ka yimaada wax kala iibsiga dadweynaha (Sales Tax).
4. Dakhliyada ka dhasha adeegyada kale ee ay dadweynaha u qabtaan,
5. Khidmadda laga qaado shaqaalaha Dawladda oo dhan iyo macaashal macaashka (Municipel Tax) oo ay qaado Dawladda Dhexe.
6. Cashuurta Shatiyada Ganacsiga kala duwan ee meheradaha.
7. Ganaaxyada ay Maxkamaduhu qabtaan iyo Deeqaha Dawladda Dhexe iyo Hay’adaha Caalamiga ah ka helaan
8. Dulsaarka ay ka helaan lacagaha ay Bankiyada dhigtaan iyo Deeqaha dibadaha ay ka helaan (Caalami ama Wadani).
9. Ijaarka ay ka helaan Hantida uu Goluhu leeyahay iyo
10. Wixii kale oo ka yimaada Hawlaha Goluhu qabto.
DIBU U HABEYNTA CASHUURAADKA
1. Maadaama ay ku kala tagsan yihiin Gobollada iyo Degmooyinku dhinaca dabiicada, Nolosha ijtimaaciga ah, Ganacsiga, wax soo saarka, istraatiijiyadda Deegaan, Darajooyinka, Adeegyada Arrimaha Bulshada iyo Dekhligaba, loona soo doortay Goleyaal Deegaan oo ah madasha xeer dejinta u gaarka ah, isla markaan laga duulayo hoos u daadajinta Maamulka “Decentralization” waxay u madax banaanyihiin dejinta Tacriifada Khidmadaha u gaarka ah oo ku salaysan qiimeyn.
2. Gole kasta oo deegaan wuu u madax banaan yahay inay xadidaan tacriifahooda, kordhiyaan dhimaan ama wax ka badalaan toosna u qaataan. waxayna ku soo saarayaan xeer hoosaad.
3. Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha ayaa awood u leh ogolaanshaha Ansixinta diidmada iyo dib u celin iyo talo ka soo jeedin wax ka bedelid.
KHIDMADAHA ADEEGYADA GOLAHA DEGMADA.
1. Nooca khidmadaha adeegyada iyo Cashuuraadka u gaarka ah Golaha Degmadu waxay kala yihiin sida soo socota isagoo madax kastaa u sii kala baxaayo dhawr khidmadood kana kooban madaxyadan: -
b) Cashuurta Liisamada Ganacsi.
t) Cashuurta Iibka Xoolaha
j) Cashuurta Calamadaha
kh) Cashuurta Beeraha
d) Cashuurta Qiimaha Guryaha
r) Cashuurta Qiimaha Dhulka
s) Cashuurta Dhismaha ku meel Gaadhka ah.
Sh) Cashuurta Suuqa
Dh) Cashuurta kal wareejinta
c) Cashuurta Kawaanka iyo Gawraca.
g) Cashuurta Barkadaha iyo Waraha
f) Cashuurta Hargaha iyo Saamaha
q) Cashuurta Diwaan Gelinta
k) Cashuurta Diiwaan Gelinta Dadweynaha
l) Cashuurta Badeecadaha iyo Qaadka
m) Cashuurta Wax soo saarka Gudaha
n) Cashuurta Isticmaalka Korontada.
w) Cashuurta Khidmada Mashaariicda
2. Qaabka xadaynta tacriifadaha waxaa lagu soo saari doonaa Xeer Wasiir marka Golaha Deegaanku soo jeediyo.
1. Golaha waxa waajib ku ah inuu diyaariyo Miisaaniyad Sannadeedkiisa (3) Bilood ka hor inta aan Sannadku bilaabmin (September kasta)
2. Miisaaniyadaa waxaa lagu muujinayaa: -
b)Ku talagalka Dakhli ee Sannadka soo socda.
t) Ku talagalka kharash ee Sannadka soo socda.
3. Miisaaniyadda waa inay muujisaa madax iyo madax-xigeenno tilmaamaya Dakhli iyo kharash.
4. Goluhu marka uu Miisaaniyadda ansixiyo, waxa uu u soo gudbinayaa Wasaaradda Arrimaha Gudaha, si loogu soo saaro Xeer Wasiir Dhaqan galkeeda.
5. Haddii Wasiirku ku arko wax ka qaldan qaab ahaan ama aan Waafaqsanayn habka Miisaaniyad samaynta iyo sharicga Xisaabaadka wuxuu xaq u leeyahay inuu ku celiyo, isaga oo talo iyo Tilmaamo raacinaya.
DIB U EEGIS MIISAANIYADEED.
1. Dib u eegis miisaaniyadeed waxa la samayn karaa (6) bilood ee sannadka ugu dambeeya (laga bilaabo kawda bisha julaay) haddiii dakhli korodh yimaado.
2. Dakhli korodhka waxa lagu jihaynayaa mashaariicda horumarinta oo kaliya.
XISAAB XIDHKA GOLAHA DEGMADA.
Xisaab xidhka Golaha Degmada ha noqdo mid Bileed, Saddex Bilood, iyo hal sannoba waxa loo soo gudbinayaa Wasaaradda Arrimaha Gudaha oo leh hubinta iyo sixidda shuruucda Xisaabaadka, hal nuqulna waxaa loo gudbinayaa Hantidhawrka Guud ee Qaranka.
KALA WAREEJIN LACAGEED.
1. Kala wareejin lacageed oo madax-xigeenada dhexdooda ah waxa la samayn karaa 6da bilood ee sannadka ugu dambeeya ansixinteeda waxaa iska leh Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha.
2. Wax kala wareejin ah laguma samayn karo madax-Xigeenada khuseeya mashaariicda la xidhiidha horumarinta.
b. Goluhu awood uma laha inuu galo kharash ka baxsan Miisaaniyadda, oo sababa Deyn lagu yeesho Golaha.
t. Mas’uuliyiinta saxeexa kharashka u idman ee galay kharash ka baxsan Miisaaniyadda, iyaga ayaa ka mas’uul ah Deynta ay galeen, loona raacayaa, loomana dooran karo mar labaad Guddoomiye ( Maayar )
j. Waxaa Guddiga fulinta iyo mas’uuliyiinta maamulkaba ka reeban inay dadweynaha, Hay’adaha Dawladda, Shirkadaha I.W.M. ka galaan Deyn aanay lacageedu Miisaaniyadda ku jirin.
x. Haddii timaado duruufo degdeg ah, sida aafooyinka dabiiciga ah ama arrimo Nabadgelyo oo u baahan dhaqaale, Miisaaniyaddana aan ugu jirin, Golaha waxaa u furan inuu qaato go’aan uu ku daboolo Deyn lacageed, oo daboosha baahidaas, isaga oo la kaashanaya Wasaaradda Arrimaha Gudaha.
Kh. Deynta ku Xusan Xarafka(d) ee Qodobkan waa in Goluhu ku soo Celiyaa muddo aan ka badnayn laba Sannadood.
XEER NIDAAMIYAHA XISAABAADKA IYO KAYDKA HANTIDA GOLAHA.
1. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ayaa u dajinaysa Golaha Deegaanka Xeer Nidaamiye u gaar ah Xisaabaadka Golaha Deegaanka oo ah “Double Entry System”.
2. Nidaamka xisaabaadka iyo maamulka makhasinada waxa lagu dhaqmayaa shuruucda iyo xeerarka Qaranka.
AWOODDA SAXEEXA KHARASH BIXINTA IYO HANTIDA KAYDKA GOLAHA .
b. Awooda Saxeexa kharash Bixinta iyo hantida kaydka Golaha, Waxaa leh Duqa Degmada iyo Xoghayaha Fulinta iyo Cidda ay u igmadaan.
t. Xoghayuhu asaga ayaa Xagga farsamada iyo waafajinta kharashyada dhinaca shuruucda iyo Miisaaniyadaha iyo Dakhligaba si gaar ah ugu idman Golaha.
j. Haddii isqabad ka yimaado awoodaha ku xusan Xarafaha (a) iyo (b) ee Qodobkan, Xoghayuhu waxa u fulinaya amarka Duqa, marka uu Duqu amar qoraal ah sidaas ku bixiyo. Wixii ka yimaadana Duqa ayaa ka mas’uul ah.
Kh. Xoghayuhu wuxuu xaq u leeyahay inuu qoraalkii Duqa iyo waxa uu ka qabo oo qoraal ah uu soo hordhigo, Golaha kalfadhiga ku xiga dhacdadaa.
1. Goluhu wuxuu guddoomi karaa deeq kasta oo uga timaada: -
b) Dawladda dhexe
t) Hay’addaha Caalamiga ah
j) Dadweynaha ama jaaliyadaha.
x) Hay’addaha Maxaliga ah iyo
kh) Shirkadaha dibada iyo Gudaba.
2. Deeqahaasi oo noqon kara, lacag, qalab, Gaadiid, Guryo iyo hadiyad sharafeed nooc kasta
3. Deeqahaas waxay ka mid noqonayaa hantida Deegaanka waana la diiwaan galinayaa.
XARAASHKA HANTIDA DEEGAANKA.
1. Haddii dan guud loo arko in la sii iibiyo (Xaraash) hanti ma Guurto ah amba guurto ah oo ka mid ah Hantida Golaha Deegaanku leeyahay, waxaa xaraashkiisa oggolaanaaya Golaha Degmada ka dibna waxa loo gudbinayaa Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha oo ku soo saaraya Xeer Wasiir ka dibna waxaa loo gudbinayaa Guddida Qandaraaska Golaha Deegaanka si loo naadiyo.
2. Shardise waxa ah in Guddi sannadeedka baadhista, kormeerka iyo hubinta Hantida Golaha (Annual Board of survey) tallo ku soo jeediyaan kuna soo caddeeyaan warbixintooda nooca hantida in la xaraasho u baahan oo faahfaahin sababaysan leh.
3. Dakhliga ka soo baxa hantida guud ee la iibiyey (xaraashay) waa in dib loogu celiyaa degmadi oo ay ka muuqataa miisaniyada degmada.
GUDDI SANNADEEDKA KORMEERKA IYO BAADHISTA “ANNUAL BOARD OF SURVEY”
1. Guddi sannadeedka kormeerka iyo baadhista hantida Golaha Degmada waxaa magacaabaaya Guddoomiyaha Gobolka, waxaana la magacaabayaa Sannad kasta bilawgiisa Bisha Jeeniwari horaanteeda, (Guddi madax banaan).
2. Xubnaha Gudidu waxay ka koobnaan doonaan (5) xubnood.
3. Qoraalka magacaabista guddi sannadeedka baadhista hantida golaha Waxaan nuqul la siinayaa Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Hantidhawrka Guud Ee Qaranka.
4. Guddi sannadeedka baadhistu xubin kuma leh Hantidhawrka Guud ee Qaranku.
5. Sidoo kale saraakiisha ka mas’uulka ah hantida la kormeeraayo kama mid ah guddida balse waa in ay goob joo ahaadaan marka rugahooda la kormeeraayo.
6. Guddida baadhistu waa inay natiijada kormeerkooda oo qoraal ah si aan dib u dhac lahayn ugu soo gudbiyaan, Guddoomiyaha Gobolka, Duqa Degmada, Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyadoo nuqulka Asalka ah loo soo diraayo Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha. Faahfaahinta qoraalka oo u kala baxaysa sidatan: -
b) Hantida dhiman ama la waayey.
t) Hantida dheeraadka leh.
j) Xaaladda guud ee hantida goluhu ku sugan tahay dhawrsanaanteeda amba haddii dayac ka muuqdo
x) Hantida xaraashka u baahan amba in la sii iibiyo ee la marinaayo qaabka qandaraas bixinta iyo naadinta.
Kh) Hanti loo duwi karo ka faa’iidaysiga isticmaalka dan guud ama deeq ahaan lagu wareejin karo hay’ad kale sababaha dan guud awgeed.
d) Gubid iyo baabiin.
Kharashka sharcigu oggol yahay ka sokow mas’uulkii ama golaha amra amba bixiya kharash aan waafaqsanayn sharciga waa in uu soo celiyaa, isaga ayaana ka mas’uul ah iyada oo la raacaayo sharciga ilaalinta hantida Qaranka.
Wasaaradda Arrimaha Gudaha ayaa awood u leh kormeerka iyo baadhista Hantida, shaqada iyo hubinta fulinta shuruucda, Xeerarka iyo Siyaasadda Guud ee Qaranka. Sidoo kale Hanti Dhawrka Guud ayaa u xil saaran baadhista maamulka iyo maaliyadda Golaha Degmada.
HESHIISYADA IYO QANDARAASYADA.
1. Goluhu wuxuu awood u leeyahay inuu heshiis ama Qandaraas la galo qof, koox, shirkad ama hay’ad, isaga oo ku tashanaya awoodiisa dhaqaale.
2. Goluhu wuxuu yeelanayaa Guddi Qandaraas oo u gaar ah.
3. Tirada xubnaha guddiga Qandaraaska iyo magacyadooda waxaa xadidaya oo magacaabaya Golaha.
4. Waxaa la raacayaa shuruudaha Qandaraas bixinta ee ku xusan sharciga Qandaraaska Qaranka.
5. Gudida qandaraasku waxay ka kooban tahay: -
t) Guddoomiye Ku-Xigeen
x) Iyo Xubno labo (2) ah.
6. Kooramka Gudida qandaraasku wuxuu ku ansaxayaa guddoomiyaha Gudida iyo ugu yaraan afar xubnood.
7. Guddida qandaraasku waxaa u banaan awoodna u leeyahay in uu u yeedho ama ku marti qaado Sarkaal ama farsamo yaqaan sare oo ka kaalmeeya dhinaca farsamada balse aan cod ku lahayn guddida.
GUDDIGA QANDARAASKA HEER GOBOL
Qandaraasyada ku saabsan maal gelin Mashaariicda, Gadashada Gaadiidka, Qalabka Guryaha iyo Xafiisyada, Dhismaha Cusub iyo Qandaraas kasta oo la xidhiidha badeecada waxaa la marinayaa Guddiga Qandaraas bixinta Ee Heer Gobol, oo uu Guddoomiye ka yahay Guddoomiyaha Gobolka.
Hanti kasta (Guurto iyo ma guurto) oo la kala iibsanayo, la isku wareejinayo, la isku hibaynayo ama la isa siinayo eek u jira xadka Degmadda, heshiiskii laga galaa ansax noqon maayo (ma noqonayo) haddii maamulka Dawladda hoose ee Degmadu aanay oggolaanin
Tusaalaha Saxeexyada Gudida Fulina ee Golaha Degmada iyo Kaydka Saxeexyada Waxaa uu Goluhu u gudbinayaa hay’adaha ay khusayso, waxaanay nuqul ogaysiin ah siinayaan Wasaaradda Arrimaha Gudaha
ARRIMO KALA DUWAN
AWOODDA DAWLADDA DHEXE.
1. Awoodda iyo Waajibaadka Dawladda Dhexe ku leedahay Golaha
Maamulka Golahu wuxuu ka mid yahay maamulka xukuumada wuxuuna toos u hoos imanayaa Wasaradda Arrimaha Gudaha oo ku leh waajibaadkan iyo Awoodahan:
b) Sugidda Amaanka iyo ilaalinta Nabadgalyada.
t) Ansixinta iyo oggolaanshaha dib u habaynta Naqshadda Degmada iyo wax ka badelkeeda.
j) Ansixinta iyo oggolaanshaha abuuridda iyo dhismaha Degsiimooyinka Cusub ee hoos yimaadda Golaha Degmada.
x) Kormeerka iyo hubinta habsami u socodka hawlaha maamulka Golaha Degmada.
Kh) Sugidda iyo u kuur galka fulinta Shuruucda, Xeerarka iyo dhaqan galka amarada ka soo baxa Goleyaasha Dastuuriga ee Qaranka.
d) Hagida iyo ku hogaaminta Siyaasadda Guud ee Qaranka.
r) Kala xadaynta xuduudaha Degsiimooyinka hoos yimaadda Gobollada iyo kala xadaynta Degmooyinka kale.
s) Jaangoynta, qorshaynta iyo raadinta maalgelinta mashaariicda horumarineed ee heer caalami iyo kuwa Dawladda Dhexe
dh) Dajinta barnaamijka iyo siyaasadda fidinta maamulka.
c) Magacaabista Guddiyaal hawl cayiman iyo magacaabista Saraakiil, iyo arrimaha kale ee Dastuurka JSL iyo Xeerkani Awoodda u siinaayo.
2. Waxaa reeban in ay Xukuumaddu soo saarto wareegto ama amar burinaya ama is hortaagaya fullinta iyo ku dhaqanka qodob ama qodobo ka mid ah xeerkan kadib markuu dhaqan galo.
3. Haddii ay dhacdo arrinta faqradda labaad kuu xusan ee qodobkan waxay ciqaabta kadhalataa gaar u noqonaysaa masuulkii amarkaa bixiyay ama wareegtadu kasoo baxday ishortaaga ahi.
BAABIIN AMA LAALID.
Waxaa la baabiiyey ama lala laalay sharci kasta oo ka soo horjeeda ama aan la socon Karin Xeerkan.
Xeerkani wuxuu dhaqan galayaa marka uu saxeexo Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland laguna baahiyo faafinta Rasmiga ah ee Qaranka.
Lifaaqa Xeerka No: 23 ee ismaamulka gobolada iyo degmooyinka.
Degmooyinka Maamul ee ku meelgaadhka ah
1. Degmo waxay degmo dhan ku noqonaysaa kadib markay ka gudubto shuruudaha qiimaynta ee degmonimo.
2. Inta natiijada qiimaynta ka horaysa waxay ahanaysaa degmo maamul oo ku meel gaadh ah.
3. Degmooyinkii la magcaabay intii ka danbeysay 1991, marka laga reebo degmooyinka Baliguble iyo Salaxley oo iyaga shirweyne lagu ansixiyey, waxa loo aqoon sanayaa degmo maamul oo ku meel gaadh ah waana ku wa hoos ku qeexan:
t) Sabo Wanaag
d) Dacar Budhuq
t) Shiikh Xasan Geele (Bali dhiig)
b) Bula xaar
j) Darar Weyne
x) Fiqi fuliye
Isu geyn waa 19 degmo oo ku meel gaadh ah.
4. Degmooyinkaa maamul inta laga soo qiimaynayo iyadoo loo raacayo shuruudaha looga baahan yahay, waxay ka tirsanaanayaan degmooyinkii ka farcameen, waxanay yeelanayaan maamule degmo.
5. Maamulaha degmada ku meel gaadhka ah waxa soo magcaabaya golaha deegaanka ee ay ka tirsan tahay, waxa soo jeedinaya gudida fulinta, waxana ogolaanaya golaha deegaanka, shardi waxa ah in maamulahaas goloha deegaanku magcaabay uu yahay xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka, deegaanan u ah degmadaa ku meel gaadhka ah.
6. Xoghayayaasha degmooyinka ku meel gaadhka ah waxa magcaabaya wasiirka wasaarada arimaha gudaha.
7. Marka ay dhamaato qiimaynta degmooyinkaas ku meel gaadhka ah, degmadii ku guuleysataa, waxay u gudbaysaa derejada D, waxana laga soo dooranayaa gole deegaan oo tiradoodu dhan tahay sagaal (9) xubnood, degmadii sifaha qiimaynta buuxin weyda waxay waayeysaa derejadii degmo maamul waxayna dib ugu noqonaysaa derejadeedii tuulo nimo.
8. Xukuumadda waxa ku waajib ah inay kusoo dhamaystirto xuduudaha, qiimaynta iyo shuruudaha kale ee looga baahanyahay Degmooyinkaas maamul ee ku meel gaadhka ah, muddo aan ka badnayn (12) bilood laga bilaabo tariikhda dhaqan galka xeerkan una soo gudbiso Golayaasha Baarlamaaka si loo ansixiyo.
Md.Cabdiraxmaan Maxamed C/Laahi Maxamed Xasan Kaahin
Guddoomiyaha Golaha Wakiillada Xog.Guud ee Golaha Wakiillada